Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/6 Febroary 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/6 Febroary 2013
Majeur (nitranga in-1) : Nanafana izany lanonana izany ny tarika Majeur 7 sy ny Tsirahonana Kidodo ary ireo mpilalaon'ny Meva production. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
amboletra (nitranga in-1) : Hanantena fitoniana tahaka ny inona ihany koa moa isika raha toa ka ny an-daniny mandrahona an-dranona mikasa hanao amboletra hody hiverina an-tanindrazana, moa ny an-kilany mandrahona tsy fahatanterahan'ny fifidianana raha tsy misy ny vatan-tenany mijoro eto an-tanàna. (Fifandrahonana)
hihemoran' (nitranga in-1) : Raha ny lalao politika misy, izay efa zary lalao maloto mihitsy aza anefa, dia mbola azo heverina indray ny hihemoran'ireo daty ireo ao aoriana kely. (Fanalavam-potoana)
Randrianantoandro (nitranga in-1) : Haja Randrianantoandro. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Nahatratra (nitranga in-1) : Nahatratra 22 no tratra tamin'ny hetsika herinandro voalohany, 17 ny herinandro faharoa ary 16 ny herinandro fahatelo nisy 16 izay nahitana polisy iray sy miaramila iray”, hoy hatrany ny tatitra. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
Saint (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
Andro voalohany: Alahady 9 febroary 2013 Kianjan'i Mahamasina 10 ora: Ajesaia # IFC 1ora: Saint Michel United FC # Darline 3 ora: AS Adema # Tana FC. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Ravoahanginirina (nitranga in-1) : Mbola vao miofana tsara ny ekipa vehivavy hiditra Top 6 na Top 8 ao Malacam», hoy Ravoahanginirina Sahondra, ray aman-dreny sy mpilalao rugby vehivavy. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Siamao (nitranga in-1) : Tsy kisendrasendra rahateo ny nanomezan'ny iraky ny Vondrona Sadc, ny Dr Léonardo Siamao fahalalahana tanteraka ny Cenit handray fanapahan-kevitra mahakasika ny raharaham-pifidianana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
marainan' (nitranga in-1) : Taorian'ny vodiondry izay notanterahina ny marainan' ny sabotsy sy ny fisoratana tany amin'ny firaisana, dia teny amin'ny fiangonana katolika Sahalava ao Fianarantsoa no nitsofan-drano ny fanambadian'izy roa ary taorian'izay ny fiarahana nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny namana, teny amin'ny Espace Andrinirina, teny Tsianolondroa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
RAVAONIRINA (nitranga in-1) : ireo zaza roa narian-dreniny ka tezain'i Charlys
MIADY AMIN'NY FIAINANA ISAN'ANDRO RAVAONIRINA CHARLYS, RENIM-PIANAKAVIANA IRAY EFA MATY VADY MONINA ENY AMBATOMARO. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Ambositra (nitranga in-1) : Voasambotra > Lehilahy iray no voasambotra tamin'ilay resaka halatra fitaovana fakana herinaratra amin'ny herin' ny masoandro fananan' ny orinasa iray tany Imerin'imady Ambositra ny 4 febroary lasa teo. (Tapatapany)
BURKINA (nitranga in-1) : GHANA # BURKINA FASO
Mety ho ny traikefa indray no hanjaka amin' ity lalao ity. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
nandraisan' (nitranga in-1) : Ny Sekretera jeneralin'ny Vaomieran'ny ranomasimbe Indianina, Jean Claude de l'Estrac, dia nanamarika fa «ny tsy fankasitrahan'ny ankamaroan'ireo mpanao politika io soson-kevitra io no antony nandraisan'ny Cenit sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana io fanapaha-kevitra io. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nandripaka (nitranga in-1) : ity krizin'ny taona 2009 mihalava hatraty amin'ny taona 2013 ity ve izany no nandripaka tanteraka ny fisainan'ny fiha- vanana malagasy. (Fifandrahonana)
tian' (nitranga in-1) : Hay ve ka azo hovaina, araka izay tian'izy ireo hanaovana azy, ihany ny datim-pifidianana ka ahoana moa no tsy mba afaka ny hanohy io fangatahana io izahay. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Formation (nitranga in-1) : taorian'ny “Grand Tournoi de la ville de Tana”, izay nanamontsanan'ny AS Adema ny Tana Formation, dia hifamerina eo amin'ny fanombohan'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Ambondrona (nitranga in-3) : omaly no nampahafantatra ny vokatra vaovao ireo mpikambana eo anivon'ny tarika Ambondrona
Tafiditra ao anatin'ireo hetsika hiatrehana ny 10 taona manaraka. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
nifamezivezy (nitranga in-1) : “Ilay findain'i Michou nifamezivezy sy ny antso an- tariby teo amin'ireo olona naiditra am-ponja ireo no isan'ny tena nitazomana azy ireo”, hoy izy ireo. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
Jackinah (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
vert (nitranga in-1) : mitohy isan'andro ny fitetezam-paritra eto an-drenivohitra ataon'ny «Police militaire » (PM) amin'ny fanaraha-maso ireo mpivarotra na olona manao fitafiana miloko « vert armé » mitovy amin'ny fanamian'ny mpitandro filaminana. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
Anjanahary (nitranga in-1) : Ny ampitson'ny andro nahafatesan'ilay raim-pianakaviana dia nanapa-kevitra ny haka ilay razana ny teo anivon'ny BMH ary nandevina azy teny Anjanahary. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
hamatsiana (nitranga in-2) : Ireo loharanon'angovo telo ireo no hotrandrahina sy hamatsiana herinaratra ho an'i Nosy-Be. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
Baptiste (nitranga in-1) : Ny zavatra azo antoka dia tena trangana haromotana io nitranga teto io ka efa nandray fepetra namono ireo alika mirenireny ny teto anivon'ny fokotany ka efa maherin'ny 18 ny isan'ireo alika efa novonoina », hoy ny nambaran-dRazafimamonjy Jean Baptiste, filoha lefitry ny fokontany Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
fampitoniana (nitranga in-1) : Ny hangatahana fotsiny dia ny mba hametrahana ireo fepetra fampitoniana rehetra mialoha ny fifidianana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Hanitry (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
tafahoatra (nitranga in-1) : Anisan'izany ny fanitarana ny fambolena ho eny amin'ny sisim-parihy, izay mampihena ny halalin'ny rano, ny fanariana maloton'ny orinasa amin'izy ireny, ny fitrandrahana ny ala diso tafahoatra, ny afo. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
zon' (nitranga in-2) : Olona milaza azy ho mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny zon' olombelona no mitarika azy ireo hivarotra eny amin' ny sisin-dalana. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
nahiana (nitranga in-1) : Tsy maintsy niatrika aho noho izany ka izaho no nampiteraka azy nefa dia vita soa aman-tsara tsy nisy nahiana. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nampitsahatra (nitranga in-1) : nampitsahatra ny asa nataony, tao amin'ny toerana kasainy mbola hitrandrahana fasimainty, ao Sainte-Luce sy akaikin' i Manantenina ao Taolagnaro ny kaompania Qmm. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
nosoloina (nitranga in-1) : Voatery nosoloina an'ny Hezami, izay tafavoaka ho mpandresy teo amin'ny lalao sakana nihaonany tamin'ny Galactic FSA, izy ireo. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
fokotany (nitranga in-1) : Ny zavatra azo antoka dia tena trangana haromotana io nitranga teto io ka efa nandray fepetra namono ireo alika mirenireny ny teto anivon'ny fokotany ka efa maherin'ny 18 ny isan'ireo alika efa novonoina », hoy ny nambaran-dRazafimamonjy Jean Baptiste, filoha lefitry ny fokontany Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Sahalava (nitranga in-1) : Taorian'ny vodiondry izay notanterahina ny marainan' ny sabotsy sy ny fisoratana tany amin'ny firaisana, dia teny amin'ny fiangonana katolika Sahalava ao Fianarantsoa no nitsofan-drano ny fanambadian'izy roa ary taorian'izay ny fiarahana nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny namana, teny amin'ny Espace Andrinirina, teny Tsianolondroa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
ville (nitranga in-1) : taorian'ny “Grand Tournoi de la ville de Tana”, izay nanamontsanan'ny AS Adema ny Tana Formation, dia hifamerina eo amin'ny fanombohan'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Didier (nitranga in-1) : Valisoa hafahafa ihany izy ity saingy nitsiry tao an-tsain'izy ireo taorian' ny nandetehan-dry Obi Mikel an-dry Didier Drogba teo amin'ny ampahefa-dalana izany. (Anjoron- »CAN »)
Claude (nitranga in-1) : Ny Sekretera jeneralin'ny Vaomieran'ny ranomasimbe Indianina, Jean Claude de l'Estrac, dia nanamarika fa «ny tsy fankasitrahan'ny ankamaroan'ireo mpanao politika io soson-kevitra io no antony nandraisan'ny Cenit sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana io fanapaha-kevitra io. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Agence (nitranga in-1) : araka ny vaovao navoa-kan'ny Agence France Presse, nivoaka omaly, dia «nolavin' ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana ao Afrika Atsimo ny fangatahan'ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, amin'ny hamerenana eo am-pelatanany ny pasipaorony». (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
Faso (nitranga in-2) : Saika mpilalao mpila ravi -nahitra kosa anefa ny an' i Burkina Faso, ka mety ho lesoka kely no handresen' i Ghana azy ireo. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Sylvia (nitranga in-1) : Manana anjara paompin-drano 15 sy fanasan-damba amin'izany ny Cua”, araka ny nambaran- dRamanantsoa Sylvia, avy amin'ny Wisup. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
fotodrafitrasa (nitranga in-2) : Nody ventiny ny rano nantsakaina, omaly satria nahazo famatsiam-bola hananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany ny Cua. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Laurette (nitranga in-1) : Ny fiarovana azy ireny ara-dalàna no tena tanjona», hoy Rasoavahiny Laurette, tompon' andraikitry ny zahavoary sy ny faritra arovana eo anivon'ny minisiteran' ny Tontolo iainana. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
nomen' (nitranga in-1) : Ilay trano nipetrahanay an-taonany maro nomen'ny rafozako ahy, raha vao maty ny vadiko, no nahatonga ilay olana. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
notakian' (nitranga in-1) : Voatsipaka am-bava-fo Rajoelina
Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitry ny Cenit sy ireo solontenan'ireo sampandraharaha iraisam-pirenena, izay nivory teny Ivato, dia tsy azo eritreretina intsony ny mbola mety ho fandrosoana ny datin'ny fifidianana solombavambahoaka kasaina hatao mialoha ny fifidianana Filoham-pirenena, araka izay notakian'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina ary nankanesany hatrany New-York. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Ivato (nitranga in-3) : «Tratry ny fepetra tsy azo anoharana isika ka tsy maintsy nandray izao fanapahan-kevitra izao», araka ny nohamafisiny taorian'ny fivoriana notanterahana teny amin'ny ivontoeram-pivoriana iraisam-pirenena teny Ivato, omaly. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nankanesany (nitranga in-1) : Voatsipaka am-bava-fo Rajoelina
solontenan' (nitranga in-1) : Voatsipaka am-bava-fo Rajoelina
mitempo (nitranga in-1) : Eo indrindra no anaovako antso ho an'ny mpitondra na izay manana fo mitempo mba hanampy sy hijery ny zava-misy marina ety aminay fa mafy ny manjo anay. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
hoentina (nitranga in-1) : Tsy maintsy nalaina ny satroka kasikety na eny amin'ny ankizy aza satria mety antonona olon-dehibe ireny hoentina mandroba”, araka ny fanazavana avy amin'ny lietna Razandrininjokiny Honoré, eo anivon'ny seraseran'ny zandarmaria. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
Hotontosaina (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny 13 hatramin'ny 23 marsa ho avy izao io fifaninanana io, ka ny lalana nodiavin'Andriatokiana nandritra ny fifaninanam-paritra, tany Namibia, tamin'ny volana janoary, no nahatonga azy hahazo ity fanasana manokana ity. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
nandevina (nitranga in-1) : Ny ampitson'ny andro nahafatesan'ilay raim-pianakaviana dia nanapa-kevitra ny haka ilay razana ny teo anivon'ny BMH ary nandevina azy teny Anjanahary. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
nahatongavan' (nitranga in-1) : Na ny nahatongavan'io olona io teo aza anefa dia mbola taty aoriananay lavitra be mihitsy. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
mialohan' (nitranga in-2) : Ankoatra ny fanaovana fitiliana dia voaporofo fa fiarovana mahomby amin' ny homamiadan'ny vozon' ny tranon-jaza ity vaksiny ity, raha atao mialohan' ny idiran'ny viriosy. (Tapatapany)
nanamarika (nitranga in-1) : Ny Sekretera jeneralin'ny Vaomieran'ny ranomasimbe Indianina, Jean Claude de l'Estrac, dia nanamarika fa «ny tsy fankasitrahan'ny ankamaroan'ireo mpanao politika io soson-kevitra io no antony nandraisan'ny Cenit sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana io fanapaha-kevitra io. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Burkina (nitranga in-2) : Saika mpilalao mpila ravi -nahitra kosa anefa ny an' i Burkina Faso, ka mety ho lesoka kely no handresen' i Ghana azy ireo. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Côte (nitranga in-1) : « Ny teknika no somary voafetra ho an'ny mpilalao afrikanina fa raha ny taktika kosa dia nahitana betsaka tamin'ity Can ity, raha tsy hilaza afa-tsy ny fomba nandresen'i Nizeria an'i Côte d'Ivoire », hoy ihany i Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Petite (nitranga in-3) : sahiran-tsaina ireo mpivarotra etsy amin'ny Petite vitesse sy ny mano- didina, omaly maraina ka nanatanteraka fivoriana. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
hiatrehana (nitranga in-1) : omaly no nampahafantatra ny vokatra vaovao ireo mpikambana eo anivon'ny tarika Ambondrona
natolotr' (nitranga in-1) : Raha ny fahafantarako azy dia mitovitovy amin'izay ihany ny isa natolotr'ireo antoko politika sasany», araka ny nomarihin'ny mpikambana eo anivon' ny vondrona politika Hpm, Ralison Roger, omaly. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
hanoloran' (nitranga in-1) : Amin'io foto-ana io ihany koa no hanoloran'ity rafitra ity ny vola fanampiany an'
i Madagasikara amin'ny fiatrehana fifidianana. (Sombiny)
anatiny (nitranga in-1) : “Lasa mivoaka eny ivelan' ny tsena avokoa ny anka- maroan'ireo mpivarotra ato amin'ny Petite vitesse ka mijaly ireo mpivarotra ao anatiny. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
Andranomahery (nitranga in-1) : a Andranomahery (0). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
hanatanterahana (nitranga in-4) : Vehivavy iray isaky ny roa minitra no maty
Nohamafisiny fa amin'io fotoam-pidirana amin'ny taom-pianarana vaovao ho avy io no hanatanterahana izany ary tsy handoavam- bola fa ho maimaim-poana ihany koa io vaksiny io eto amintsika any aoriana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nanaovana (nitranga in-2) : Nambaran'ity farany fa iray volana latsaka izay no nanaovana ny hetsika ary efa manodidina ny 50 ny olona tratra. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
CHARLYS (nitranga in-1) : ireo zaza roa narian-dreniny ka tezain'i Charlys
Notadiavina (nitranga in-1) : Notadiavina andro maromaro saingy tsy hita, ka izaho no mamelona sy manabe ilay zaza izay lahy kely ankehitriny. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nanaovany (nitranga in-1) : Nanizingizina anefa ny tenany fa nandritra izay taona maro nanaovany renin-jaza izay dia «tsy mbola nisy maty na zaza vao teraka na ny reniny tao aminy». (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Mikel (nitranga in-1) : Valisoa hafahafa ihany izy ity saingy nitsiry tao an-tsain'izy ireo taorian' ny nandetehan-dry Obi Mikel an-dry Didier Drogba teo amin'ny ampahefa-dalana izany. (Anjoron- »CAN »)
teknisiana (nitranga in-2) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Pitroipa (nitranga in-1) : Raha isan' ireo mifantina ny mpilalao mendrika ho an'ity Can ity aho dia i Jonnathan Pitroipa, mpilalaon'i Burkina Faso no hahazo izany. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Tôta (nitranga in-1) : “Mialoha ny fihaonan'ny ekipa tsirairay dia ireo ekipa sokajy latsaky ny 13 taona aloha no mihaona”, hoy i Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta, filohan'ny ligin'Analamanga ho an'ny baolina kitra. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Alasora (nitranga in-1) : Isan'izany ny kaominina Bemasoandro, Alasora, Andranonahoatra, Ankadikely, Ambohidrapeto ary Sabotsy Namehana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
distrika (nitranga in-4) : « Hatao amina distrika roa, dia i Soavinandriana sy i Toamasina I ny andrana momba ity vaksiny ity ho an'i Madagasikara », hoy ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon'ny minisiteran'ny Fahasalamam- bahoaka. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Bemasoandro (nitranga in-1) : Isan'izany ny kaominina Bemasoandro, Alasora, Andranonahoatra, Ankadikely, Ambohidrapeto ary Sabotsy Namehana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
voavitran' (nitranga in-1) : Ho voavitran'ny dimy taona sy ny 10 taona manaraka ve ny faharovitan'ny fihavanan'ny samy Malagasy. (Fifandrahonana)
lamba (nitranga in-1) : Entana mampiahiahy maro be toy ny vilany efa niasa miisa 13 sy lamba maro tao anaty sobika no tratra teny aminy. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
andraisan' (nitranga in-1) : Hiavaka ny fisian'ny lalao andraisan'ireo ekipa latsaky ny 13 taona anjara, araka ny fitakiana nataon'ny ligy tamin'ireo ekipa rehetra mpandray anjara ao amin'ny diviziona voalohany. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
pirenena (nitranga in-1) : « Hotohanana ara-teknika ihany koa ny kaompaniam- pirenena misahana ny famatsiana herinaratra. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
hotanterahina (nitranga in-2) : nihemotra ireo datim-pifidianana saingy tsy niova tamin'izay efa tapaka tamin'ny volana aogositra 2012 aloha hatreto ny filaharan'ireo fifidianana hotanterahina. (Sombiny)
prezidà (nitranga in-1) : «Tsy mbola manana prezidà sy mpanohana izahay fa mivelona amin'ny tsipaipaika. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Nody (nitranga in-1) : Nody ventiny ny rano nantsakaina, omaly satria nahazo famatsiam-bola hananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany ny Cua. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
faharovitan' (nitranga in-1) : Ho voavitran'ny dimy taona sy ny 10 taona manaraka ve ny faharovitan'ny fihavanan'ny samy Malagasy. (Fifandrahonana)
nitrangan' (nitranga in-1) : Nigadra teny Antanimora
Andro nivoahan'ity ramatoa ity ny fonjan'Antanimora mihitsy no nitrangan'io fanomezana azy zazakely hotaizany io, izany hoe ny 7 septambra 2012. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Espace (nitranga in-1) : Taorian'ny vodiondry izay notanterahina ny marainan' ny sabotsy sy ny fisoratana tany amin'ny firaisana, dia teny amin'ny fiangonana katolika Sahalava ao Fianarantsoa no nitsofan-drano ny fanambadian'izy roa ary taorian'izay ny fiarahana nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny namana, teny amin'ny Espace Andrinirina, teny Tsianolondroa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
hampidirana (nitranga in-1) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Roger (nitranga in-1) : Raha ny fahafantarako azy dia mitovitovy amin'izay ihany ny isa natolotr'ireo antoko politika sasany», araka ny nomarihin'ny mpikambana eo anivon' ny vondrona politika Hpm, Ralison Roger, omaly. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
Tambohobe (nitranga in-1) : 13h Promotion Tsaramasay (1) # CEA Tambohobe (2). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
fampiteraha (nitranga in-1) : Charlys efa-mianaka
Fampiterahana Fomba hafa kely ny fampiteraha ataon'ny maman'i Tojo fa tsy mitovy ny an'ny any amin'ny hôpitaly na ny an'ireo mpampivelona. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
militaire (nitranga in-1) : mitohy isan'andro ny fitetezam-paritra eto an-drenivohitra ataon'ny «Police militaire » (PM) amin'ny fanaraha-maso ireo mpivarotra na olona manao fitafiana miloko « vert armé » mitovy amin'ny fanamian'ny mpitandro filaminana. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
hifampitana (nitranga in-1) : Mitetika ny hahazo ny amboaran'ny «Intersection» izahay ka hifampitana amin' ny ekipa iray avy amin'Andrefan'Iarivo, amin'ny alahady 10 febroary, ho avy izao, eny amin'ny Kianja Makis. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Atallah (nitranga in-2) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Antanimora (nitranga in-2) : Nigadra teny Antanimora
nampiantso (nitranga in-1) : « Vao naheno io vaovao io izahay dia nampiantso ny dokotera tao amin'ny »Institut pasteur » sy ny avy eny amin'ny distrika hanao fitiliana. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
hampiray (nitranga in-1) : Ireo tompomenakely hifandom-bera sy hifaly havanja rehefa ho tonga ny fotoana hampiray ny tombontsoa… Fa ianareo nitorevaka tetsy amin'ny kianjan'ny 13 mey na nidanik'andro tetsy amin'ny Magro Behoririka, moa misy fantatrareo ny zava-miafin'ny adiady politikan-dry zareo ireo. (Fifandrahonana)
judiciaire' (nitranga in-1) : “Nahazo taratasy avy any amin'ny Fitsarana, manome alalana anay mahakasika ny fanohizana ny fanadihadiana, na ilay antsoina hoe “délégation judiciaire, izahay hikarohana ireo rehetra mety ho tafiditra ao anatin'iny raharaha iny”, hoy ny teo anivon'ny sampan-draha-raha misahana ny raharaha heloka bevava eny Anosy (Scac), rafitra iray eo anivon'ny polisy. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
Comores (nitranga in-1) : Hita tao avokoa ireo profesora maro avy atsy amin'ny nosy La Réunion sy Comores ary Frantsa. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
Romuald (nitranga in-1) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Hamaha (nitranga in-1) : Hamaha ny krizy ve ka hamerina an-dRavaloma- nana eto Madagasikara. (Fifandrahonana)
Ratsimandresy (nitranga in-2) : na dia tsy isan'ireo tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny sokajy junior aza Andriatokiana Ratsimandresy dia isan'ireo mpilalao tenisy nahazo ny fanasana manokana hiatrika izany any Kenya. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
hiverenan' (nitranga in-1) : Antso no ataon'ireo delegen'ny mpivarotra sy ny fiaraha-miasa amin' ny Cua mba hiverenan' ireo mpivarotra ao anatin' ny ara-dalàna. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
ditrany (nitranga in-1) : Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ilay lisea dia «tsy azo lavina ny fisian'ny mpianatra maditra saingy misy fepetra tsy maintsy raisina mifanandrify amin'izay ditrany izay». (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
Faralala (nitranga in-1) : Soratra sy sary: Faralala. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
andavan' (nitranga in-1) : Raha iray amin'ireo tovovavy miady izay ho vadin'i Francky izy ao anatin'ny tantara, dia niditra lalina eo amin'ny sehatry ny fanambadiana kosa i Emilie amin'ny fiainana andavan'andro. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Namehana (nitranga in-1) : Isan'izany ny kaominina Bemasoandro, Alasora, Andranonahoatra, Ankadikely, Ambohidrapeto ary Sabotsy Namehana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Manarintsoa (nitranga in-1) : roa lahy tamin'ireo telo voasambotry ny polisy, tetsy Manarintsoa ny 4 febroary teo, izay voarohirohy tamina fifohana rongony, no notanana vonjimaika eny amin' ny fonjaben'Antanimora rehefa avy natolotra ny Fampanoavana, omaly. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
Primatiora (nitranga in-2) : fAMPANDROSOANA
Ny fanamaivanana ireo fombafomba arahina amin'ny fanaovana raharaham-panjakana, toy ny eo amin'ny lafiny fandoavan-ketra, no isan'ny soson-kevitra entin'ny eo anivon'ny Primatiora lefitra misahana ny Fampandrosoana sy ny Indostria hanarenana ny toekarena. (Tapatapany)
nite­raka (nitranga in-1) : «Olona tsy fantatro mihitsy no nite­raka ireo zaza ireo. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nidanik' (nitranga in-1) : Ireo tompomenakely hifandom-bera sy hifaly havanja rehefa ho tonga ny fotoana hampiray ny tombontsoa… Fa ianareo nitorevaka tetsy amin'ny kianjan'ny 13 mey na nidanik'andro tetsy amin'ny Magro Behoririka, moa misy fantatrareo ny zava-miafin'ny adiady politikan-dry zareo ireo. (Fifandrahonana)
fanambaràna (nitranga in-1) : Fandraisana fepetra noho ny mbola tsy fahatanterahan'ny sori-dalana no anton'izany, araka ny fanambaràna nivoaka, omaly. (Sombiny)
Andranonahoatra (nitranga in-1) : Isan'izany ny kaominina Bemasoandro, Alasora, Andranonahoatra, Ankadikely, Ambohidrapeto ary Sabotsy Namehana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
tsipaipaika (nitranga in-1) : «Tsy mbola manana prezidà sy mpanohana izahay fa mivelona amin'ny tsipaipaika. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
anaovany (nitranga in-1) : Ankoatra ny ao Mandena, izay efa anaovany fitrandrahana ankehitriny mantsy dia mihevitra ny mbola hitrandraka ao amin'ireo faritra ireo ity kaompania ity, any aoriana any. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
idiran' (nitranga in-1) : Ankoatra ny fanaovana fitiliana dia voaporofo fa fiarovana mahomby amin' ny homamiadan'ny vozon' ny tranon-jaza ity vaksiny ity, raha atao mialohan' ny idiran'ny viriosy. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
Manantenina (nitranga in-1) : nampitsahatra ny asa nataony, tao amin'ny toerana kasainy mbola hitrandrahana fasimainty, ao Sainte-Luce sy akaikin' i Manantenina ao Taolagnaro ny kaompania Qmm. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
armé (nitranga in-1) : mitohy isan'andro ny fitetezam-paritra eto an-drenivohitra ataon'ny «Police militaire » (PM) amin'ny fanaraha-maso ireo mpivarotra na olona manao fitafiana miloko « vert armé » mitovy amin'ny fanamian'ny mpitandro filaminana. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
fahatarana (nitranga in-1) : «Efa vita tanteraka ny fandraisam-peo sy ny fandrindrana na dia nisedra olana maro aza, ka nahatonga ny fahatarana. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
hanarenana (nitranga in-1) : fAMPANDROSOANA
handrafitra (nitranga in-2) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
Nangony (nitranga in-1) : Nangonin'i Roméo Andriamihaja. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
notanisay (nitranga in-1) : Santionany amin'ireo voka-tsoa azo avy amin'ny fisian' ny Faritra Mando ireo, no notanisain'Andriamaro Luciano, tompon'andraikitry ny Faritra Mando avy ao amin'ny Conservation International, omaly teny Tsarasaotra, nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an' ny Faritra Mando, ankalazaina isaky ny 02 febroary. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
natoky (nitranga in-1) : NATOKY TENA
Vao teo amin'ny fotoana hanaovana «tirs au but» nandritra ny fihaonana tamin'i Afrika Atsimo, mpampiantrano, dia efa natoky tena be ireo mpanao gazety maliana fa hibata fandresena ny Voro- mahery. (Anjoron- »CAN »)
lisea (nitranga in-2) : Raha ny tatitra voaray teo anivon'ny polisim-pirenena dia «mpianatra ao amina lisea lehibe iray eto an-drenivohitra ny roa amin'izy ireo ary mpivarotra kosa ilay iray». (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
hitrandrahana (nitranga in-1) : nampitsahatra ny asa nataony, tao amin'ny toerana kasainy mbola hitrandrahana fasimainty, ao Sainte-Luce sy akaikin' i Manantenina ao Taolagnaro ny kaompania Qmm. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
naratra (nitranga in-1) : Hatramin'ny vehivavy bevohoka handeha hisafo tao amiko dia naratra satria mba nijoro ihany koa», hoy izy nitamberina ny lasa no sady nalahelo mafy. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
bahoaka (nitranga in-1) : « Hatao amina distrika roa, dia i Soavinandriana sy i Toamasina I ny andrana momba ity vaksiny ity ho an'i Madagasikara », hoy ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon'ny minisiteran'ny Fahasalamam- bahoaka. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
karay (nitranga in-1) : roa herinandro eo sisa dia hifarana ny fifanintsanana kitra lalaovin'olona fito kara- karain'ny Fikambanana mitaiza tanora (Fimita) eny Ankazomanga-Andraharo. (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
Aurette (nitranga in-1) : Mampandre hatrany ny birao nandefa azy ireo izahay rehefa misy fitarainana toy ireny”, hoy Razanazafy Aurette Marguerite, tompon' andraikitra eo anivon'ny Mfoptls. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
Barphil (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
GHANA (nitranga in-1) : GHANA # BURKINA FASO
Antsirabe (nitranga in-5) : Aorian'io seho santatra io dia efa maromaro ireo fandaharam-potoanan'ny tarika Ambondrona amin' ny fitetezam-paritra samihafa ka efa tafiditra ao anatin'ireo toerana handalovan'izy ireo any Antsirabe Fianarantsoa, Nosy-Be, Antsiranana, Ambaton-
drazaka, Amparafaravola ary ireo faritra samihafa manodidina ny renivohitra. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Mahazoarivo (nitranga in-1) : «165 eo ho eo no isa narosonay hodinihina teny Mahazoarivo. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
tale (nitranga in-1) : Raha tsy nifanena tamin'io izy dia isan'ireo mpilalao tonga tany amin'ny manasa-dalana”, hoy i Dina Razafimahatratra, tale teknika nasionalin'ny tenisy. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
maliana (nitranga in-2) : Teknisiana kokoa ny mpanazatran'ny Voromahery maliana saingy matanjaka kosa ny fahaiza-miaraka ho an'ny Super Eagles, araka ny hevitr'i Rôrô. (Anjoron- »CAN »)
Hampiasaina (nitranga in-1) : Hampiasaina mandritra ny herintaona io lelavola io ary entina hijerena ny fomba hahafahana mitrandraka na ny rano na ny masoandro na ny rivotra hamatsiana herinaratra any Nosy-Be. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
nitazonana (nitranga in-1) : Ny 24 janoary teo no tapitra ny fe-potoana nitazonana azy vonjimaika tao amin'ny fonjan'Andohatany Antsi-rabe. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
mpampiantrano (nitranga in-2) : NATOKY TENA
narian' (nitranga in-1) : Zazakely roa narian'ny reniny
Zazakely roa no taizan'ny maman'i Tojo ao aminy amin'izao fotoana izao. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Ivandry (nitranga in-3) : lehilahy iray no voalaza fa matin'ny haromotana ny alatsinainy 26 janoary teo, tetsy Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Tsaramasay (nitranga in-3) : a
Voka-dalao ny alahady 3 Febroary 8h Fc Lalah Tsaramasay (3) # Fc J. (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
Ghana (nitranga in-4) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Sadc (nitranga in-2) : Nampian' ny filalaovan'ny Sadc ny asa fanelanelanana ka vao mainka nampitombo ny halako bika tsy tiako tarehy teo amin'ny mpomba ny an-daniny sy ny an-kilany. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
niasa (nitranga in-1) : Entana mampiahiahy maro be toy ny vilany efa niasa miisa 13 sy lamba maro tao anaty sobika no tratra teny aminy. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Tsarasaotra (nitranga in-1) : Santionany amin'ireo voka-tsoa azo avy amin'ny fisian' ny Faritra Mando ireo, no notanisain'Andriamaro Luciano, tompon'andraikitry ny Faritra Mando avy ao amin'ny Conservation International, omaly teny Tsarasaotra, nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an' ny Faritra Mando, ankalazaina isaky ny 02 febroary. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
Fanatic (nitranga in-1) : 9h Fanatic Ankorondrano atsinanana (2) # Fc JAH Antohomadinika (2). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
Ambohidrapeto (nitranga in-1) : Isan'izany ny kaominina Bemasoandro, Alasora, Andranonahoatra, Ankadikely, Ambohidrapeto ary Sabotsy Namehana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
ekipa (nitranga in-10) : MALI # NIZERIA
Tsy dia tena ekipa goavana i Nizeria tamin' ity Can ity saingy aleoko kokoa mahita azy ireo mahazo amboara raha mahita ny fanamboarana nataon'i Stephen Keshi, tamin'ny fanatanorana ny ekipam-pirenena. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Razanazafy (nitranga in-1) : Mampandre hatrany ny birao nandefa azy ireo izahay rehefa misy fitarainana toy ireny”, hoy Razanazafy Aurette Marguerite, tompon' andraikitra eo anivon'ny Mfoptls. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
voarohirohy (nitranga in-1) : roa lahy tamin'ireo telo voasambotry ny polisy, tetsy Manarintsoa ny 4 febroary teo, izay voarohirohy tamina fifohana rongony, no notanana vonjimaika eny amin' ny fonjaben'Antanimora rehefa avy natolotra ny Fampanoavana, omaly. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
production (nitranga in-2) : tamin'ny sabotsy teo no nohamasinina ny fanambadian'i Emilie sy Dafara, tany Fianarantsoa
Iray amin'ireo mpilalao fototra amin'ilay horonantsary «Rafozan-tsarotiny», vokarin'ny Meva production. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
mitovitovy (nitranga in-1) : Raha ny fahafantarako azy dia mitovitovy amin'izay ihany ny isa natolotr'ireo antoko politika sasany», araka ny nomarihin'ny mpikambana eo anivon' ny vondrona politika Hpm, Ralison Roger, omaly. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
Nanana (nitranga in-1) : Nanana fahasahiana lehibe ihany koa moa aho tamin'izany», hoy ny fitantaran-dRavaonirina Charlys ny olona nampiterahany voalohany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
2017 (nitranga in-1) : Haharitra roa taona ny andrana, itarafana ny fomba ahazoana manaparitaka ny vaksiny manerana ny Nosy any amin'ny taona
2016 na 2017 any », raha ny fanampim-panazavana ihany. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
2016 (nitranga in-1) : Haharitra roa taona ny andrana, itarafana ny fomba ahazoana manaparitaka ny vaksiny manerana ny Nosy any amin'ny taona
2011 (nitranga in-1) : Niforona ny 27 desambra 2011 ny XV Roses. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
2010 (nitranga in-1) : Ny 30 jolay 2010 no tonga tao amiko ny renim-pianakaviana iray bevohoka ary nilaza fa mihetsiketsika. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
2013 (nitranga in-8) : Nambarany ihany koa, tamin'ny fanadihadiana momba ny Can 2013, fa tsy mba mitovy hevitra amin'ireo milaza ny fidinan' ny haavo teknikan'ireo ekipam-pirenena nandray anjara tamin'ity Can 2013 ity ny tenany. (Tapatapany)
2012 (nitranga in-6) : Roa taona taorian'izay, ny 7 septambra 2012 dia nisy tranga nitovy tamin'io saingy ramatoa nibaby zaza 4 taona indray ilay bevohoka. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
nohadihadiana (nitranga in-2) : Narahina hatrany Antsirabe ilay fiara nitondra azy ka nohadihadiana teo amin'ny toby fiantsonana. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
nangataka (nitranga in-1) : Ny volana novambra 2012 no efa nangataka ny famerenana ny pasipaorony ny mpanorina ny orinasa Tiko saingy tsy nahazo rariny tamin'ny Fitsarana tany an-toerana. (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
fiatrehana (nitranga in-1) : Amin'io foto-ana io ihany koa no hanoloran'ity rafitra ity ny vola fanampiany an'
amiko (nitranga in-8) : «Voajanahary tato amiko ilay izy fa tsy nisy nampianatra. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Rafanjanirina (nitranga in-1) : Rafanjanirina Louise Ernestine no tena anarana fa efa very anarana amin'ny Emilie izy ary Ramanandraibe Jean François na i Dafara kosa no nampiakatra azy ho vadiny. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Gabon (nitranga in-1) : Efa nitranga izany tamin'ny taon-dasa, izay nihaonan' izy ireo tamin'ny Gabon, mpampiantrano. (Anjoron- »CAN »)
pitsaboana (nitranga in-1) : “Eto amin'ny Hjra irery ihany koa no ahitana toeram- pitsaboana harifomba eto amintsika. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
aoriananay (nitranga in-1) : Na ny nahatongavan'io olona io teo aza anefa dia mbola taty aoriananay lavitra be mihitsy. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
namonoana (nitranga in-1) : Nitsotra anefa ireo polisy fa mbola tsy hitahita soritra mihitsy ny mety ho antony namonoana ity tovovavy ity. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
Antsiranana (nitranga in-1) : Aorian'io seho santatra io dia efa maromaro ireo fandaharam-potoanan'ny tarika Ambondrona amin' ny fitetezam-paritra samihafa ka efa tafiditra ao anatin'ireo toerana handalovan'izy ireo any Antsirabe Fianarantsoa, Nosy-Be, Antsiranana, Ambaton-
drazaka, Amparafaravola ary ireo faritra samihafa manodidina ny renivohitra. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
Afrique (nitranga in-1) : Ny Fondation Coca-cola Afrique no namatsy vola ny tetikasa, izay mitentina 1 400 000 dolara. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Amparafaravola (nitranga in-1) : Aorian'io seho santatra io dia efa maromaro ireo fandaharam-potoanan'ny tarika Ambondrona amin' ny fitetezam-paritra samihafa ka efa tafiditra ao anatin'ireo toerana handalovan'izy ireo any Antsirabe Fianarantsoa, Nosy-Be, Antsiranana, Ambaton-
Marguerite (nitranga in-1) : Mampandre hatrany ny birao nandefa azy ireo izahay rehefa misy fitarainana toy ireny”, hoy Razanazafy Aurette Marguerite, tompon' andraikitra eo anivon'ny Mfoptls. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
ahenoana (nitranga in-1) : “Ray aman-dreny mitaraina fa tsy ahenoana feo ny zanany, na tsy tamana, na mitaraina fa be asa… no manatona ety. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
vitesse (nitranga in-3) : sahiran-tsaina ireo mpivarotra etsy amin'ny Petite vitesse sy ny mano- didina, omaly maraina ka nanatanteraka fivoriana. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
Kenya (nitranga in-1) : na dia tsy isan'ireo tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny sokajy junior aza Andriatokiana Ratsimandresy dia isan'ireo mpilalao tenisy nahazo ny fanasana manokana hiatrika izany any Kenya. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
mpahazo (nitranga in-1) : Saika io avokoa no hita amin'ireo trangana homa- miadana eto Madagasikara mpahazo ny vehivavy, ankoatra ny homamiadan' ny nono. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
Andriatokiana (nitranga in-1) : na dia tsy isan'ireo tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny sokajy junior aza Andriatokiana Ratsimandresy dia isan'ireo mpilalao tenisy nahazo ny fanasana manokana hiatrika izany any Kenya. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
handaniana (nitranga in-1) : Ao anatin' ny fitondrana ireo hetsika ho amin'ny fampandrosoana mandra-pahatapitry ny tetezamita dia havondrona ao anatina tahirin-kevitra iray ary hodinihina ny soson-kevitra omen'ireo Primatiora lefitra roa sy ireo mpandray anjara amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ireo mpamatsy vola mialohan'ny handaniana izany ny faran'ny volana febroary 2013. (Tapatapany)
Rosa (nitranga in-1) : Kliobana mpilalao rugby, zandriny indrindra vao herintaona, zanaky ny Rosa Club de L'Emyrne, ny XV Roses d'Antohomadinika III G Hangar. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
hazolena (nitranga in-1) : «Nigadra tany Antanimora aho noho ny fananan'ny hafa vola be sy ny fanaovana tsindry hazolena. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Joseph (nitranga in-2) : Sady maka vola amin'ireo mpivarotra ireo ihany koa ireo olona ireo”, araka ny fitarainan- dRakotovao Joseph, filohan' ny delegen'ny tsena, etsy amin'ny Petite vitesse. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
Presse (nitranga in-1) : araka ny vaovao navoa-kan'ny Agence France Presse, nivoaka omaly, dia «nolavin' ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana ao Afrika Atsimo ny fangatahan'ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, amin'ny hamerenana eo am-pelatanany ny pasipaorony». (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
mPIVAROTENA (nitranga in-1) : mPIVAROTENA
Naneho an-karihary ireo fikambanana mpivaro- tena nizeriana fa «tsy hisy handoa vola izay miaraka amin'izy ireo ao anatin'ny herinandro raha mahazo ny Can ny Super Eagles avy any Nizeria». (Anjoron- »CAN »)
nitondra (nitranga in-2) : Voasambotra hatramin'ny mpandalo nitondra izany loko izany ary nisy ankizy 10 taona nobatain'ireo PM mihitsy. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Sainte (nitranga in-1) : 14h Ex RCA Ankazomanga (0) # Sainte Marie Ankazomanga (0). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
dolara (nitranga in-1) : Ny Fondation Coca-cola Afrique no namatsy vola ny tetikasa, izay mitentina 1 400 000 dolara. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
ligy (nitranga in-2) : Hiavaka ny fisian'ny lalao andraisan'ireo ekipa latsaky ny 13 taona anjara, araka ny fitakiana nataon'ny ligy tamin'ireo ekipa rehetra mpandray anjara ao amin'ny diviziona voalohany. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
profesora (nitranga in-2) : Tsy manana afa-tsy profesora roa manam- pahaizana manokana momba ny fandidiana ny zaza isika eto Madagasikara. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
drazaka (nitranga in-1) : Aorian'io seho santatra io dia efa maromaro ireo fandaharam-potoanan'ny tarika Ambondrona amin' ny fitetezam-paritra samihafa ka efa tafiditra ao anatin'ireo toerana handalovan'izy ireo any Antsirabe Fianarantsoa, Nosy-Be, Antsiranana, Ambaton-
horonantsary (nitranga in-2) : tamin'ny sabotsy teo no nohamasinina ny fanambadian'i Emilie sy Dafara, tany Fianarantsoa
Rôrô (nitranga in-4) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
GANEANA (nitranga in-1) : TOMBONY HO AN'NY BLACK STARS GANEANA. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Rakotoarivelo (nitranga in-1) : Raha feno ny fepetra teknika dia tokony ho feno ihany koa ny fepetra politika», araka ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny Kaongresin'ny tetezamita, Mamy Rakotoarivelo omaly. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nohamafisy (nitranga in-1) : «Efa nahazo fankatoavana tamin'ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana ny fampiharana io fanapahan-kevitra io», araka ny nohamafisin'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Super (nitranga in-2) : Teknisiana kokoa ny mpanazatran'ny Voromahery maliana saingy matanjaka kosa ny fahaiza-miaraka ho an'ny Super Eagles, araka ny hevitr'i Rôrô. (Anjoron- »CAN »)
Ralison (nitranga in-1) : Raha ny fahafantarako azy dia mitovitovy amin'izay ihany ny isa natolotr'ireo antoko politika sasany», araka ny nomarihin'ny mpikambana eo anivon' ny vondrona politika Hpm, Ralison Roger, omaly. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
pilaminan' (nitranga in-1) : MANDODONA MAFY > Mitaky ny hisian'ny fivo- riana maika eo amin'ireo mpanelanelana iraisam-pirenena momba ny raharahan'i Madagasi-kara (Gic) sy ny filankevi- pilaminan'ny Vondrona Afrikanina ireo mpitarika ny Vondrona Afrika-nina. (Sombiny)
novantanina (nitranga in-1) : Tsy nisy na inona na inona intsony novantanina tao. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
tenany (nitranga in-3) : Nambarany ihany koa, tamin'ny fanadihadiana momba ny Can 2013, fa tsy mba mitovy hevitra amin'ireo milaza ny fidinan' ny haavo teknikan'ireo ekipam-pirenena nandray anjara tamin'ity Can 2013 ity ny tenany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
pasteur (nitranga in-1) : « Vao naheno io vaovao io izahay dia nampiantso ny dokotera tao amin'ny »Institut pasteur » sy ny avy eny amin'ny distrika hanao fitiliana. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
tanàna (nitranga in-1) : Ny alarobia faha-25 septambra 2013 indray kosa no hanatontosana ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka ary ny alarobia 23 oktobra 2013 no daty raikitra fa hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
sehatry (nitranga in-2) : «Nanova ireo fitaovana nampiasaina izahay ka niezaka ny nanatsara ny sehatry ny feo», hoy ihany i Beranto. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Jonnathan (nitranga in-1) : Raha isan' ireo mifantina ny mpilalao mendrika ho an'ity Can ity aho dia i Jonnathan Pitroipa, mpilalaon'i Burkina Faso no hahazo izany. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Andraisoro (nitranga in-2) : Teny Andraisoro no nipetraka izy ireo tamin'izany ary naharitra an-taonany maro. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Cenit (nitranga in-6) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nanohizana (nitranga in-1) : Tetsy Anosibe tsena, omaly, no nanohizana izany fanaraha-maso izany ka nakana ireo satroka sy fitafiana teny an-tsena sy tamin'ny mpandalo. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
hanokatra (nitranga in-1) : hANARA-MASO AKAIKY > Amin'ny volana marsa izao no hanokatra ny biraom-pifandraisany amin'i Mada- gasikara eto Antanana-rivo ny Vaomieran'ny Ranomasimbe Indianina (Coi). (Sombiny)
FAMPITERAHANA (nitranga in-1) : AMIN'NY ALALAN'NY FANORANA SY FAMPITERAHANA OLONA NO MAMPIHODINA NY FIAINAN'IZY EFA-MIANAKA. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
ben' (nitranga in-1) : Ny alarobia faha-25 septambra 2013 indray kosa no hanatontosana ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka ary ny alarobia 23 oktobra 2013 no daty raikitra fa hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
hatraty (nitranga in-1) : ity krizin'ny taona 2009 mihalava hatraty amin'ny taona 2013 ity ve izany no nandripaka tanteraka ny fisainan'ny fiha- vanana malagasy. (Fifandrahonana)
Koweit (nitranga in-3) : 150 raha kely ary mahatratra 700 isan'andro rehefa tena betsaka ny mpanamboatra pasipaoro ety Anosy
Tovovavy manamboatra pasipaoro ho any Koweit avokoa ny 10%-n'ireo manan-draharaha eo anivon'ny sampan-draharahan'ny polisim-pirenena misahana izany, etsy Anosy. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
angovo (nitranga in-1) : Nankasitraka ny fanomezana fanampiana mitentina 1 tapitrisa dôlara hamaranana ny fananganana io tetikasa io ny Tahirim-bolan'ny angovo azo havaozina eto Afrika (Sefa). (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
Gavy (nitranga in-2) : Anisan'ireo firenena an-dalam-pandrosoana miisa valo, nahazo fankatoavana fahazoana famatsiam-bola avy amin'ny Gavi, ho afaka mampihatra ny andrana momba ny fampidirana ny vaksiny
«anti-VPH» i Madagasikara. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
fombafomba (nitranga in-1) : fAMPANDROSOANA
Gilbert (nitranga in-1) : Hatramin'izao, miandry mpanohana izahay », hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon' andraikitra teknika amin'ity fihaonana mety hahazoana omby sy ondry matavy ity. (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
maroan' (nitranga in-1) : “Lasa mivoaka eny ivelan' ny tsena avokoa ny anka- maroan'ireo mpivarotra ato amin'ny Petite vitesse ka mijaly ireo mpivarotra ao anatiny. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
tato (nitranga in-3) : «Voajanahary tato amiko ilay izy fa tsy nisy nampianatra. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
hametrahana (nitranga in-2) : Ny hangatahana fotsiny dia ny mba hametrahana ireo fepetra fampitoniana rehetra mialoha ny fifidianana. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
Mfoptls (nitranga in-1) : Mampandre hatrany ny birao nandefa azy ireo izahay rehefa misy fitarainana toy ireny”, hoy Razanazafy Aurette Marguerite, tompon' andraikitra eo anivon'ny Mfoptls. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
taty (nitranga in-1) : Na ny nahatongavan'io olona io teo aza anefa dia mbola taty aoriananay lavitra be mihitsy. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
hisorohana (nitranga in-1) : Manentana hatrany ny olona ny mpitandro filaminana mba hisorohana ny fandriampahalemana. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
nahazoana (nitranga in-1) : Fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina avy amin'ny tetikasa Wisup no nahazoana fanampiana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
tsatokazo (nitranga in-1) : Saika miantehitra amin'i Seydou Keita sy ny mpiandry tsatokazo kosa i Mali amin'io lalao io. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
zanany (nitranga in-1) : “Ray aman-dreny mitaraina fa tsy ahenoana feo ny zanany, na tsy tamana, na mitaraina fa be asa… no manatona ety. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
mampiahiahy (nitranga in-2) : “Na olon-tsotra na mpitandro filaminana ka hita fa manao fanamiana mampiahiahy sy tsy ara-dalàna dia samborina avokoa. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Beranto (nitranga in-3) : Hitondra an-tsehatra io vokatra vaovao mitondra ny lohateny hoe «Havaoziko» io ry Beranto sy ny tariny io alahady io, etsy amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
maloton' (nitranga in-1) : Anisan'izany ny fanitarana ny fambolena ho eny amin'ny sisim-parihy, izay mampihena ny halalin'ny rano, ny fanariana maloton'ny orinasa amin'izy ireny, ny fitrandrahana ny ala diso tafahoatra, ny afo. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
raharahan' (nitranga in-1) : MANDODONA MAFY > Mitaky ny hisian'ny fivo- riana maika eo amin'ireo mpanelanelana iraisam-pirenena momba ny raharahan'i Madagasi-kara (Gic) sy ny filankevi- pilaminan'ny Vondrona Afrikanina ireo mpitarika ny Vondrona Afrika-nina. (Sombiny)
handalovan' (nitranga in-1) : Aorian'io seho santatra io dia efa maromaro ireo fandaharam-potoanan'ny tarika Ambondrona amin' ny fitetezam-paritra samihafa ka efa tafiditra ao anatin'ireo toerana handalovan'izy ireo any Antsirabe Fianarantsoa, Nosy-Be, Antsiranana, Ambaton-
fifanintsanana (nitranga in-1) : roa herinandro eo sisa dia hifarana ny fifanintsanana kitra lalaovin'olona fito kara- karain'ny Fikambanana mitaiza tanora (Fimita) eny Ankazomanga-Andraharo. (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
mpanazatran' (nitranga in-1) : Teknisiana kokoa ny mpanazatran'ny Voromahery maliana saingy matanjaka kosa ny fahaiza-miaraka ho an'ny Super Eagles, araka ny hevitr'i Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
mpampiteraka (nitranga in-1) : Nanomboka teo dia lasa mpampiteraka ny tenany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
eritreretinay (nitranga in-1) : “Fialonana ny fahaizany no eritreretinay. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
hamerenana (nitranga in-1) : araka ny vaovao navoa-kan'ny Agence France Presse, nivoaka omaly, dia «nolavin' ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana ao Afrika Atsimo ny fangatahan'ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, amin'ny hamerenana eo am-pelatanany ny pasipaorony». (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
Najanony (nitranga in-1) : Najanony teo ilay zazavavy kely. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nandrodana (nitranga in-1) : «Tsy tao an-trano izahay indray andro fa nandeha nivavaka no tonga tao ny olona izay tsy vadintany akory nandrodana ny tranoko. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Ankadikely (nitranga in-1) : Isan'izany ny kaominina Bemasoandro, Alasora, Andranonahoatra, Ankadikely, Ambohidrapeto ary Sabotsy Namehana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Noentina (nitranga in-1) : Noentina niverina tany Betafo ireo entana ka olona maro vaky trano no nilaza ho tompony. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
nakana (nitranga in-1) : Tetsy Anosibe tsena, omaly, no nanohizana izany fanaraha-maso izany ka nakana ireo satroka sy fitafiana teny an-tsena sy tamin'ny mpandalo. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
harifomba (nitranga in-1) : “Eto amin'ny Hjra irery ihany koa no ahitana toeram- pitsaboana harifomba eto amintsika. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
BLACK (nitranga in-1) : TOMBONY HO AN'NY BLACK STARS GANEANA. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
nampiatoana (nitranga in-1) : Naato anefa izany asa izany tamin'ity taona ity noho ny olana ara-toekarena iraisam-pirenena niteraka fatiantoka ka tsy maintsy nampiatoana ireo tetikasa izay nosokajiany ho mbola tsy laharam-pahamehana. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
hikatsahana (nitranga in-1) : Mbola ny kianjan'i Mahamasina hatrany no sehatra handray izany ary samy mivonona ny roa tonta amin'ny hikatsahana ny fandresena. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Makis (nitranga in-1) : Mitetika ny hahazo ny amboaran'ny «Intersection» izahay ka hifampitana amin' ny ekipa iray avy amin'Andrefan'Iarivo, amin'ny alahady 10 febroary, ho avy izao, eny amin'ny Kianja Makis. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Réunion (nitranga in-1) : Hita tao avokoa ireo profesora maro avy atsy amin'ny nosy La Réunion sy Comores ary Frantsa. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
sakelimihoajoro (nitranga in-1) : nisolo tena an'Atsimondrano ny ekipan'ny XV Roses amin'ny “Intersection”
Mitady hanao sakelimihoajoro. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Club (nitranga in-1) : Kliobana mpilalao rugby, zandriny indrindra vao herintaona, zanaky ny Rosa Club de L'Emyrne, ny XV Roses d'Antohomadinika III G Hangar. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Pamphile (nitranga in-1) : Miankina amin'ny fivoaran'ny toe-draharaha ny fanohizana ny asa”, hoy Rakotoari- manana Pamphile, sekretera jeneralin'ny minisiteran'ny Harena an-kibon'ny tany. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
nenty (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny, dia nisy ny fanavaozana nentin'ny tarika tamin'ity vokatra ity indrindra teo amin'ny lafiny feo. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
mikasa (nitranga in-1) : Hanantena fitoniana tahaka ny inona ihany koa moa isika raha toa ka ny an-daniny mandrahona an-dranona mikasa hanao amboletra hody hiverina an-tanindrazana, moa ny an-kilany mandrahona tsy fahatanterahan'ny fifidianana raha tsy misy ny vatan-tenany mijoro eto an-tanàna. (Fifandrahonana)
isaky (nitranga in-4) : Santionany amin'ireo voka-tsoa azo avy amin'ny fisian' ny Faritra Mando ireo, no notanisain'Andriamaro Luciano, tompon'andraikitry ny Faritra Mando avy ao amin'ny Conservation International, omaly teny Tsarasaotra, nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an' ny Faritra Mando, ankalazaina isaky ny 02 febroary. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
Rano­maso (nitranga in-1) : Rano­maso ny ahy vao tonga avy any am-piangonana tamin'izay. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Hezamy (nitranga in-1) : Voatery nosoloina an'ny Hezami, izay tafavoaka ho mpandresy teo amin'ny lalao sakana nihaonany tamin'ny Galactic FSA, izy ireo. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
onaona (nitranga in-1) : Ity farany izay amaritana ireo toerana rehetra ahitana ny lanjan'ny anjara asan'ny rano, toy ny onaona, renirano, farihy…
Nambarany anefa fa mbola maro ny tsindry ataon'ny mponina amin'izy ireny. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
nitanana (nitranga in-1) : Raharaha dimy no efa naha- voampanga ity lehilahy ity ka nitanana azy vonjimaika tany am-ponja ny volana oktobra 2012. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
ranomasimbe (nitranga in-1) : Ny Sekretera jeneralin'ny Vaomieran'ny ranomasimbe Indianina, Jean Claude de l'Estrac, dia nanamarika fa «ny tsy fankasitrahan'ny ankamaroan'ireo mpanao politika io soson-kevitra io no antony nandraisan'ny Cenit sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana io fanapaha-kevitra io. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
notanana (nitranga in-1) : roa lahy tamin'ireo telo voasambotry ny polisy, tetsy Manarintsoa ny 4 febroary teo, izay voarohirohy tamina fifohana rongony, no notanana vonjimaika eny amin' ny fonjaben'Antanimora rehefa avy natolotra ny Fampanoavana, omaly. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
fasimainty (nitranga in-1) : nampitsahatra ny asa nataony, tao amin'ny toerana kasainy mbola hitrandrahana fasimainty, ao Sainte-Luce sy akaikin' i Manantenina ao Taolagnaro ny kaompania Qmm. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
napetraky (nitranga in-2) : Ny fitoriana napetraky ny fikambanan'ireo niha-ram-boina tamin'ny raharaha 7 febroary (Av7) no fantatra fa mbola nahatonga ny fanagiazana ny pasipaoron' ny Filoha teo aloha. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
hajanona (nitranga in-1) : Notapahin'ny rehetra, tamin'ity taona ity, fa hajanona 10 ihany ireo ekipa mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga eo amin'ny diviziona voalohany taorian'ny tsy naharesenam-peo intsony ny Japan Actuel's. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
nitamberina (nitranga in-1) : Hatramin'ny vehivavy bevohoka handeha hisafo tao amiko dia naratra satria mba nijoro ihany koa», hoy izy nitamberina ny lasa no sady nalahelo mafy. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
voarara (nitranga in-1) : Mbola tsy voarara toy ny any Liban rahateo mantsy ny fandefasana mpiasa any an-toerana. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
Naiditra (nitranga in-1) : mpivarotra rongony > Naiditra am-ponja vonjimaika omaly ilay ramatoa iray voalaza fa mpivarotra rongony eny amin'ny faritra Andravo-ahangy, saron'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina, ny 4 febroary teo. (Tapatapany)
Iankinan' (nitranga in-1) : Iankinan'ny fahatsaran'ny hazan-drano, ny fambolena, ny zahavoary amin'ny ankapobeny ihany koa ny Faritra Mando. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
fanatanorana (nitranga in-1) : MALI # NIZERIA
Tsy dia tena ekipa goavana i Nizeria tamin' ity Can ity saingy aleoko kokoa mahita azy ireo mahazo amboara raha mahita ny fanamboarana nataon'i Stephen Keshi, tamin'ny fanatanorana ny ekipam-pirenena. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
natory (nitranga in-1) : Teraka soa aman-tsara tokoa izy saingy reraka ka navelako naka aina natory tao amiko. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
pahaizana (nitranga in-1) : Tsy manana afa-tsy profesora roa manam- pahaizana manokana momba ny fandidiana ny zaza isika eto Madagasikara. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
Fampiterahana (nitranga in-1) : Charlys efa-mianaka
Notanterahina (nitranga in-1) : Notanterahina ny sabotsy tontolo andro teo ny fomba sy ny fanamasinana ny fanambadiany tany Fianarantsoa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Charlys (nitranga in-5) : ireo zaza roa narian-dreniny ka tezain'i Charlys
Rasoloarison (nitranga in-1) : Monica Rasoloarison. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
paipaikany (nitranga in-1) : Samy manana ny paipaikany avy mantsy. (Fanalavam-potoana)
Randy (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
hijery (nitranga in-1) : Eo indrindra no anaovako antso ho an'ny mpitondra na izay manana fo mitempo mba hanampy sy hijery ny zava-misy marina ety aminay fa mafy ny manjo anay. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Stephen (nitranga in-1) : MALI # NIZERIA
Nursie (nitranga in-1) : Ilay zokiny anefa mba arako ihany ny nanome azy Nursie fony izy mbola nila nono satria tsy nanofa trano izahay tamin'izany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
sigara (nitranga in-1) : «Rehefa misy mpianatra tratra mifoka sigara dia tsy avela mianatra herinandro. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
Galactic (nitranga in-1) : Voatery nosoloina an'ny Hezami, izay tafavoaka ho mpandresy teo amin'ny lalao sakana nihaonany tamin'ny Galactic FSA, izy ireo. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
nijoro (nitranga in-2) : Koa satria niezaka nijoro hatrany aho tamin'ny tsy rariny, fibodoana ny taninay dia izay no nampigadra ahy», hoy ny fitantarany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
kevitry (nitranga in-1) : «Raha distrika misy mponina mihoatra ny 150 000 dia tokony hanana solombavambahoaka roa avy», araka ny soson- kevitry ny Hpm ihany. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
ahafantaran' (nitranga in-2) : Maman'i Tojo no ahafantaran'ny olona ahy hatramin'izao», hoy izy. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
naheno (nitranga in-1) : « Vao naheno io vaovao io izahay dia nampiantso ny dokotera tao amin'ny »Institut pasteur » sy ny avy eny amin'ny distrika hanao fitiliana. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
rakikira (nitranga in-2) : Hivoaka amin'ny fomba ofisialy mandritra ny fampisehoana, hataon'ny tarika Ambondrona amin'ny 24 febroary izao ny rakikira fahenina. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
hataon' (nitranga in-1) : Hivoaka amin'ny fomba ofisialy mandritra ny fampisehoana, hataon'ny tarika Ambondrona amin'ny 24 febroary izao ny rakikira fahenina. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
traikefa (nitranga in-2) : GHANA # BURKINA FASO
Mety ho ny traikefa indray no hanjaka amin' ity lalao ity. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
Narahina (nitranga in-1) : Narahina hatrany Antsirabe ilay fiara nitondra azy ka nohadihadiana teo amin'ny toby fiantsonana. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
nampoizy (nitranga in-1) : izy tsy nihemotra no mety ho nahagaga fa efa nampoizin' ny maro ihany fa tsy ho voatazona ireo tetiandrom-pifidianana nofaritana tamin'ny volana aogositra 2012. (Fanalavam-potoana)
zanak' (nitranga in-1) : Efa manambady aman-janaka ny zanak'izy ireo vavy amin'izao fotoana izao. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Drogba (nitranga in-1) : Valisoa hafahafa ihany izy ity saingy nitsiry tao an-tsain'izy ireo taorian' ny nandetehan-dry Obi Mikel an-dry Didier Drogba teo amin'ny ampahefa-dalana izany. (Anjoron- »CAN »)
mpikatroka (nitranga in-1) : Ahitana mpikatroka «minime», «cadet», «junior», Diviziona fahatelo sy vehivavy, ireo mpikambana 65 lahy sy 35 vavy ao aminy. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Tsianolondroa (nitranga in-1) : Taorian'ny vodiondry izay notanterahina ny marainan' ny sabotsy sy ny fisoratana tany amin'ny firaisana, dia teny amin'ny fiangonana katolika Sahalava ao Fianarantsoa no nitsofan-drano ny fanambadian'izy roa ary taorian'izay ny fiarahana nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny namana, teny amin'ny Espace Andrinirina, teny Tsianolondroa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
nampitombo (nitranga in-1) : Nampian' ny filalaovan'ny Sadc ny asa fanelanelanana ka vao mainka nampitombo ny halako bika tsy tiako tarehy teo amin'ny mpomba ny an-daniny sy ny an-kilany. (Fifandrahonana)
Honoré (nitranga in-1) : Tsy maintsy nalaina ny satroka kasikety na eny amin'ny ankizy aza satria mety antonona olon-dehibe ireny hoentina mandroba”, araka ny fanazavana avy amin'ny lietna Razandrininjokiny Honoré, eo anivon'ny seraseran'ny zandarmaria. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
nodiavy (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny 13 hatramin'ny 23 marsa ho avy izao io fifaninanana io, ka ny lalana nodiavin'Andriatokiana nandritra ny fifaninanam-paritra, tany Namibia, tamin'ny volana janoary, no nahatonga azy hahazo ity fanasana manokana ity. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
Daniel (nitranga in-1) : Zavatra mbola tsy nisy teto aminay teto Ivandry io tranga io, na izany aza anefa dia tsy niraviravy tanana ny fokontany fa nanentana ireo manana alika any an-tranony mba hanao vaksiny azy ireny », hoy Randriamanatsoa Daniel, filohan'ny faritra fahatelo ao amin'ny fokontanin'Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
tika (nitranga in-1) : Dia mbola haverina eto indray ve ny fahaizan'ny sasany mitsambikina amin'ny sambo ilany, rehefa mitady hilen- tika ny lakan-jejony naha-jejojejo sy naha matimatin-kambo azy hatramin'izay. (Fifandrahonana)
ireto (nitranga in-1) : Raha ny voalazan'ilay tatitra hatrany dia efa nahatratra herintaona mahery efa-bolana ny faharetan'ny nifohan'ny iray tamin'ireto mpianatra ireto ity zava-maha- domelina ity. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
Ankorondrano (nitranga in-1) : 9h Fanatic Ankorondrano atsinanana (2) # Fc JAH Antohomadinika (2). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
nampiterahany (nitranga in-1) : Nanana fahasahiana lehibe ihany koa moa aho tamin'izany», hoy ny fitantaran-dRavaonirina Charlys ny olona nampiterahany voalohany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
afak' (nitranga in-1) : olona telo no efa naiditra am-ponja vonjimaika afak'omaly maha-kasika ny famonoana an'i Michou, ilay tovovavy 16 taona mpianatra teny amin' ny oniversiten'Antanana-rivo ary hita faty teny an-toerana ny 15 janoary teo. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
niova (nitranga in-1) : nihemotra ireo datim-pifidianana saingy tsy niova tamin'izay efa tapaka tamin'ny volana aogositra 2012 aloha hatreto ny filaharan'ireo fifidianana hotanterahina. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Radilofe (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
France (nitranga in-1) : araka ny vaovao navoa-kan'ny Agence France Presse, nivoaka omaly, dia «nolavin' ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana ao Afrika Atsimo ny fangatahan'ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, amin'ny hamerenana eo am-pelatanany ny pasipaorony». (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
Roses (nitranga in-3) : nisolo tena an'Atsimondrano ny ekipan'ny XV Roses amin'ny “Intersection”
Afrika (nitranga in-7) : Mafimafy ny mifanandrina amin'i Ghana noho ny tanjany sy ny maha ekipa goavana azy aty Afrika. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
zahavoary (nitranga in-2) : Iankinan'ny fahatsaran'ny hazan-drano, ny fambolena, ny zahavoary amin'ny ankapobeny ihany koa ny Faritra Mando. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
nivoahan' (nitranga in-2) : Nigadra teny Antanimora
Andro nivoahan'ity ramatoa ity ny fonjan'Antanimora mihitsy no nitrangan'io fanomezana azy zazakely hotaizany io, izany hoe ny 7 septambra 2012. (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
Betafo (nitranga in-5) : vao nivoaka ny fonja dia namerina ny asa ratsy fanaony ny lehilahy iray mpividy entana halatra any Betafo sy ny manodidina. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
nipetrahanay (nitranga in-1) : Ilay trano nipetrahanay an-taonany maro nomen'ny rafozako ahy, raha vao maty ny vadiko, no nahatonga ilay olana. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Rakotomavo (nitranga in-1) : Ny Filohan'ny tetezamita rahateo dia mbola any am-potony any ka ho hita eo izay hambarany rehefa tonga eto an-tanindrazana izy», hoy ny fanamarihana nataon'ny sekretera nasionalin'ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, omaly. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Nivoitra (nitranga in-1) : Nivoitra izany nandritra ny kaongresy faharoa natao tetsy amin'ny Carlton Anosy omaly. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
voasambotry (nitranga in-1) : roa lahy tamin'ireo telo voasambotry ny polisy, tetsy Manarintsoa ny 4 febroary teo, izay voarohirohy tamina fifohana rongony, no notanana vonjimaika eny amin' ny fonjaben'Antanimora rehefa avy natolotra ny Fampanoavana, omaly. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
vozon' (nitranga in-3) : ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon' ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka
Fisorohana ny aretina homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
MALI (nitranga in-1) : MALI # NIZERIA
naiditra (nitranga in-2) : olona telo no efa naiditra am-ponja vonjimaika afak'omaly maha-kasika ny famonoana an'i Michou, ilay tovovavy 16 taona mpianatra teny amin' ny oniversiten'Antanana-rivo ary hita faty teny an-toerana ny 15 janoary teo. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
Razafimahatratra (nitranga in-2) : Raha tsy nifanena tamin'io izy dia isan'ireo mpilalao tonga tany amin'ny manasa-dalana”, hoy i Dina Razafimahatratra, tale teknika nasionalin'ny tenisy. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
Antenimierampirenena (nitranga in-1) : araka ny soson-kevitry ny ankamaroan'ireo vondrona sy antoko ary ankolafy politika nanaso-nia ny sori-dalana dia solom-bamvabahoaka manodidina ny 160 eo ho eo no tokony handrafitra ny Antenimierampirenena ao anatin'ny Repoblika faha-IV, raha 128 teo ho eo izany teo aloha. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
zandarmaria (nitranga in-1) : Tsy maintsy nalaina ny satroka kasikety na eny amin'ny ankizy aza satria mety antonona olon-dehibe ireny hoentina mandroba”, araka ny fanazavana avy amin'ny lietna Razandrininjokiny Honoré, eo anivon'ny seraseran'ny zandarmaria. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
noenty (nitranga in-1) : Araka ny fanovana noentin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit) sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana dia nahemotra ny alarobia 24 jolay 2013 ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
ataon' (nitranga in-4) : Ity farany izay amaritana ireo toerana rehetra ahitana ny lanjan'ny anjara asan'ny rano, toy ny onaona, renirano, farihy…
Nambarany anefa fa mbola maro ny tsindry ataon'ny mponina amin'izy ireny. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
hovaina (nitranga in-1) : Hay ve ka azo hovaina, araka izay tian'izy ireo hanaovana azy, ihany ny datim-pifidianana ka ahoana moa no tsy mba afaka ny hanohy io fangatahana io izahay. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Dafara (nitranga in-2) : tamin'ny sabotsy teo no nohamasinina ny fanambadian'i Emilie sy Dafara, tany Fianarantsoa
rugby (nitranga in-2) : Kliobana mpilalao rugby, zandriny indrindra vao herintaona, zanaky ny Rosa Club de L'Emyrne, ny XV Roses d'Antohomadinika III G Hangar. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
fizotry (nitranga in-1) : Ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana hotanterahina eto amin- tsika no anton'io fano-kafan'ny Coi birao mano- kana io. (Sombiny)
MAMPIHODINA (nitranga in-1) : AMIN'NY ALALAN'NY FANORANA SY FAMPITERAHANA OLONA NO MAMPIHODINA NY FIAINAN'IZY EFA-MIANAKA. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nila (nitranga in-1) : Ilay zokiny anefa mba arako ihany ny nanome azy Nursie fony izy mbola nila nono satria tsy nanofa trano izahay tamin'izany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
narary (nitranga in-1) : Tsy nisy olona lehibe tao aminay fa narary tany amin'ny hopitaly koa ny reniko. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
angalary (nitranga in-1) : Efa fanaony ny manangona ireo entana angalarin'ireo mpiara-dia aminy any Betafo ka miva-rotra izany ao Antsirabe. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Lalàna (nitranga in-1) : Mahakasika ireo fanam- baràna fa mijaly ireo mpiasa any dia nilaza ny teo anivon' ny minisiteran'ny Asam-panjakana sy ny Lalàna sosialy (Mfoptls) fa mbola vitsy ny fitarainana voaray hatreto. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
nitazomana (nitranga in-1) : “Ilay findain'i Michou nifamezivezy sy ny antso an- tariby teo amin'ireo olona naiditra am-ponja ireo no isan'ny tena nitazomana azy ireo”, hoy izy ireo. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
Goff (nitranga in-1) : “Hampandroso sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka no tanjonay amin'ireo firenena ahitana zava-pisotro Coca-cola”, hoy kosa i Lalatiana Le Goff, avy amin' ny Fondation Coca-cola. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Randrianasoloson (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
Randriamanatsoa (nitranga in-1) : Zavatra mbola tsy nisy teto aminay teto Ivandry io tranga io, na izany aza anefa dia tsy niraviravy tanana ny fokontany fa nanentana ireo manana alika any an-tranony mba hanao vaksiny azy ireny », hoy Randriamanatsoa Daniel, filohan'ny faritra fahatelo ao amin'ny fokontanin'Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
teknikan' (nitranga in-1) : Nambarany ihany koa, tamin'ny fanadihadiana momba ny Can 2013, fa tsy mba mitovy hevitra amin'ireo milaza ny fidinan' ny haavo teknikan'ireo ekipam-pirenena nandray anjara tamin'ity Can 2013 ity ny tenany. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
hiasa (nitranga in-1) : “ Telo volana teo ho eo no tsikaritra fa mihamaro ireo tovovavy hiasa any Koweit manamboatra pasipaoro eto raha ny ho any Maorisy no maro an'isa teo aloha. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
nobatay (nitranga in-1) : Voasambotra hatramin'ny mpandalo nitondra izany loko izany ary nisy ankizy 10 taona nobatain'ireo PM mihitsy. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
hilaza (nitranga in-1) : « Ny teknika no somary voafetra ho an'ny mpilalao afrikanina fa raha ny taktika kosa dia nahitana betsaka tamin'ity Can ity, raha tsy hilaza afa-tsy ny fomba nandresen'i Nizeria an'i Côte d'Ivoire », hoy ihany i Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
andraikitry (nitranga in-1) : Ny fiarovana azy ireny ara-dalàna no tena tanjona», hoy Rasoavahiny Laurette, tompon' andraikitry ny zahavoary sy ny faritra arovana eo anivon'ny minisiteran' ny Tontolo iainana. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
lefitry (nitranga in-1) : Ny zavatra azo antoka dia tena trangana haromotana io nitranga teto io ka efa nandray fepetra namono ireo alika mirenireny ny teto anivon'ny fokotany ka efa maherin'ny 18 ny isan'ireo alika efa novonoina », hoy ny nambaran-dRazafimamonjy Jean Baptiste, filoha lefitry ny fokontany Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
nataon' (nitranga in-4) : MALI # NIZERIA
Tsy dia tena ekipa goavana i Nizeria tamin' ity Can ity saingy aleoko kokoa mahita azy ireo mahazo amboara raha mahita ny fanamboarana nataon'i Stephen Keshi, tamin'ny fanatanorana ny ekipam-pirenena. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
hivalian' (nitranga in-1) : JR
Tsy manaiky lembenana ny Tgv Tsy nandà ny fanapaha-kevitra nivoaka omaly ny antoko Tgv saingy tsy manary toky ny hivalian'ny fitakian'ny Filohan'ny tetezamita ny hanatanterahana mialoha ny fifidianana rehetra ny fifidianana solombavambahoaka. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
mpomba (nitranga in-1) : Nampian' ny filalaovan'ny Sadc ny asa fanelanelanana ka vao mainka nampitombo ny halako bika tsy tiako tarehy teo amin'ny mpomba ny an-daniny sy ny an-kilany. (Fifandrahonana)
hanatsarana (nitranga in-1) : “Hampandroso sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka no tanjonay amin'ireo firenena ahitana zava-pisotro Coca-cola”, hoy kosa i Lalatiana Le Goff, avy amin' ny Fondation Coca-cola. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
MAME­LONA (nitranga in-1) : 51 TAONA IZY AMIN'IZAO FOTOANA IZAO SAINGY MAME­LONA ANKIZY TELO, KA MBOLA ZAZA NY ROA. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nanentana (nitranga in-1) : Zavatra mbola tsy nisy teto aminay teto Ivandry io tranga io, na izany aza anefa dia tsy niraviravy tanana ny fokontany fa nanentana ireo manana alika any an-tranony mba hanao vaksiny azy ireny », hoy Randriamanatsoa Daniel, filohan'ny faritra fahatelo ao amin'ny fokontanin'Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Razakaboana (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
nipoitra (nitranga in-1) : Rehefa nojereko dia efa nipoitra ny lohan'ilay zaza. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
anton' (nitranga in-3) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Sombiny)
hamaranana (nitranga in-1) : Nankasitraka ny fanomezana fanampiana mitentina 1 tapitrisa dôlara hamaranana ny fananganana io tetikasa io ny Tahirim-bolan'ny angovo azo havaozina eto Afrika (Sefa). (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
notanterahina (nitranga in-1) : Taorian'ny vodiondry izay notanterahina ny marainan' ny sabotsy sy ny fisoratana tany amin'ny firaisana, dia teny amin'ny fiangonana katolika Sahalava ao Fianarantsoa no nitsofan-drano ny fanambadian'izy roa ary taorian'izay ny fiarahana nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny namana, teny amin'ny Espace Andrinirina, teny Tsianolondroa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Rakotovao (nitranga in-1) : “Omena olona vaovao ny toerana rehefa tsy tonga ao anatin' ny 15 andro ireo mpivarotra ireo”, hoy hatrany Rakotovao Joseph. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
nanaikitra (nitranga in-1) : Tokony ho tamin'ny iray volana lasa izay no nanaikitra ny tompony sy mpatsaka rano iray ary olona telo hafa monina eo amin'ny manodidina ny alika iray. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Francky (nitranga in-1) : Raha iray amin'ireo tovovavy miady izay ho vadin'i Francky izy ao anatin'ny tantara, dia niditra lalina eo amin'ny sehatry ny fanambadiana kosa i Emilie amin'ny fiainana andavan'andro. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
trangana (nitranga in-2) : Saika io avokoa no hita amin'ireo trangana homa- miadana eto Madagasikara mpahazo ny vehivavy, ankoatra ny homamiadan' ny nono. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
nahafatesan' (nitranga in-1) : Ny ampitson'ny andro nahafatesan'ilay raim-pianakaviana dia nanapa-kevitra ny haka ilay razana ny teo anivon'ny BMH ary nandevina azy teny Anjanahary. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Soavinandriana (nitranga in-1) : « Hatao amina distrika roa, dia i Soavinandriana sy i Toamasina I ny andrana momba ity vaksiny ity ho an'i Madagasikara », hoy ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon'ny minisiteran'ny Fahasalamam- bahoaka. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
Adema (nitranga in-2) : taorian'ny “Grand Tournoi de la ville de Tana”, izay nanamontsanan'ny AS Adema ny Tana Formation, dia hifamerina eo amin'ny fanombohan'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Roméo (nitranga in-2) : Nangonin'i Roméo Andriamihaja. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Elite (nitranga in-1) : Tanjona ny ho tafakatra ao amin'ny Elite 1 mihitsy», hoy Radimiarison Heriniaina, mpitantana sady mpilalao rahateo. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
anaovako (nitranga in-1) : Eo indrindra no anaovako antso ho an'ny mpitondra na izay manana fo mitempo mba hanampy sy hijery ny zava-misy marina ety aminay fa mafy ny manjo anay. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
fiara (nitranga in-2) : Tamin'ny 5 ora maraina, ny alahady teo, no nahatrarana ity lehilahy ity tao anaty fiara mpitatitra mam-pitohy an'i Betafo sy Antsirabe. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Ambato­maro (nitranga in-1) : Trano iray no navelany ho an'ireo vady aman-janany teny Ambato­maro. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
NAIDITRA (nitranga in-1) : VAO TSY ELA AKORY IZAY NO NARODAN'NY OLONA IHANY KOA NY TRANON'IZY IREO NO SADY NAIDITRA AM-PONJA TENY ANTANIMORA IZY NOHO NY ADY TANY. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Ravaonirina (nitranga in-1) : Raha tsy olona mivavaka aho mety tsy fantatro intsony izay niafarako», hoy Ravaonirina Charlys, teo am-pamaranana. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Ernestine (nitranga in-1) : Rafanjanirina Louise Ernestine no tena anarana fa efa very anarana amin'ny Emilie izy ary Ramanandraibe Jean François na i Dafara kosa no nampiakatra azy ho vadiny. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Michel (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
novonoina (nitranga in-1) : Ny zavatra azo antoka dia tena trangana haromotana io nitranga teto io ka efa nandray fepetra namono ireo alika mirenireny ny teto anivon'ny fokotany ka efa maherin'ny 18 ny isan'ireo alika efa novonoina », hoy ny nambaran-dRazafimamonjy Jean Baptiste, filoha lefitry ny fokontany Ivandry. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
tafavoaka (nitranga in-1) : Voatery nosoloina an'ny Hezami, izay tafavoaka ho mpandresy teo amin'ny lalao sakana nihaonany tamin'ny Galactic FSA, izy ireo. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
tompondakan' (nitranga in-3) : na dia tsy isan'ireo tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny sokajy junior aza Andriatokiana Ratsimandresy dia isan'ireo mpilalao tenisy nahazo ny fanasana manokana hiatrika izany any Kenya. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
ekipan' (nitranga in-1) : nisolo tena an'Atsimondrano ny ekipan'ny XV Roses amin'ny “Intersection”
nampiasaina (nitranga in-1) : «Nanova ireo fitaovana nampiasaina izahay ka niezaka ny nanatsara ny sehatry ny feo», hoy ihany i Beranto. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
nahitana (nitranga in-2) : « Ny teknika no somary voafetra ho an'ny mpilalao afrikanina fa raha ny taktika kosa dia nahitana betsaka tamin'ity Can ity, raha tsy hilaza afa-tsy ny fomba nandresen'i Nizeria an'i Côte d'Ivoire », hoy ihany i Rôrô. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
mora (nitranga in-1) : Vao mainka hahatonga ireo olom-boatendry ( tamin'ny fomba mora ) hipi-kelika izany rehetra izany. (Fanalavam-potoana)
Teknisiana (nitranga in-1) : Teknisiana kokoa ny mpanazatran'ny Voromahery maliana saingy matanjaka kosa ny fahaiza-miaraka ho an'ny Super Eagles, araka ny hevitr'i Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
hisian' (nitranga in-1) : MANDODONA MAFY > Mitaky ny hisian'ny fivo- riana maika eo amin'ireo mpanelanelana iraisam-pirenena momba ny raharahan'i Madagasi-kara (Gic) sy ny filankevi- pilaminan'ny Vondrona Afrikanina ireo mpitarika ny Vondrona Afrika-nina. (Sombiny)
nahatonga (nitranga in-4) : Hotontosaina amin'ny 13 hatramin'ny 23 marsa ho avy izao io fifaninanana io, ka ny lalana nodiavin'Andriatokiana nandritra ny fifaninanam-paritra, tany Namibia, tamin'ny volana janoary, no nahatonga azy hahazo ity fanasana manokana ity. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
nanomezan' (nitranga in-1) : Tsy kisendrasendra rahateo ny nanomezan'ny iraky ny Vondrona Sadc, ny Dr Léonardo Siamao fahalalahana tanteraka ny Cenit handray fanapahan-kevitra mahakasika ny raharaham-pifidianana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Ajesaia (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
Eagles (nitranga in-2) : Teknisiana kokoa ny mpanazatran'ny Voromahery maliana saingy matanjaka kosa ny fahaiza-miaraka ho an'ny Super Eagles, araka ny hevitr'i Rôrô. (Anjoron- »CAN »)
Océane (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
hambarany (nitranga in-1) : Ny Filohan'ny tetezamita rahateo dia mbola any am-potony any ka ho hita eo izay hambarany rehefa tonga eto an-tanindrazana izy», hoy ny fanamarihana nataon'ny sekretera nasionalin'ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, omaly. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
mifanandrina (nitranga in-1) : Mafimafy ny mifanandrina amin'i Ghana noho ny tanjany sy ny maha ekipa goavana azy aty Afrika. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
itarafana (nitranga in-1) : Haharitra roa taona ny andrana, itarafana ny fomba ahazoana manaparitaka ny vaksiny manerana ny Nosy any amin'ny taona
Nanafana (nitranga in-1) : Nanafana izany lanonana izany ny tarika Majeur 7 sy ny Tsirahonana Kidodo ary ireo mpilalaon'ny Meva production. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Nanizingizina (nitranga in-1) : Nanizingizina anefa ny tenany fa nandritra izay taona maro nanaovany renin-jaza izay dia «tsy mbola nisy maty na zaza vao teraka na ny reniny tao aminy». (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nahatrarana (nitranga in-1) : Tamin'ny 5 ora maraina, ny alahady teo, no nahatrarana ity lehilahy ity tao anaty fiara mpitatitra mam-pitohy an'i Betafo sy Antsirabe. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Tournoy (nitranga in-1) : taorian'ny “Grand Tournoi de la ville de Tana”, izay nanamontsanan'ny AS Adema ny Tana Formation, dia hifamerina eo amin'ny fanombohan'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Real (nitranga in-1) : 11h Real 07 67ha (4) # Tsiresy Ankazomanga (1). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
nodinihina (nitranga in-3) : Fandinihana momba ny fanatanterahana ny asa maika amin'ny fandidiana ny zaza no lohahevitra nodinihina nandritra ny kaongresy. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
nihaonany (nitranga in-1) : Voatery nosoloina an'ny Hezami, izay tafavoaka ho mpandresy teo amin'ny lalao sakana nihaonany tamin'ny Galactic FSA, izy ireo. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
hana (nitranga in-1) : Mbola hanohy ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha nahafaty ity tovovavy ity ny polisy misa- hana ny heloka bevava, etsy Anosy. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
hifamerina (nitranga in-1) : taorian'ny “Grand Tournoi de la ville de Tana”, izay nanamontsanan'ny AS Adema ny Tana Formation, dia hifamerina eo amin'ny fanombohan'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
dôlara (nitranga in-2) : Nankasitraka ny fanomezana fanampiana mitentina 1 tapitrisa dôlara hamaranana ny fananganana io tetikasa io ny Tahirim-bolan'ny angovo azo havaozina eto Afrika (Sefa). (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
hikarohana (nitranga in-1) : “Nahazo taratasy avy any amin'ny Fitsarana, manome alalana anay mahakasika ny fanohizana ny fanadihadiana, na ilay antsoina hoe “délégation judiciaire, izahay hikarohana ireo rehetra mety ho tafiditra ao anatin'iny raharaha iny”, hoy ny teo anivon'ny sampan-draha-raha misahana ny raharaha heloka bevava eny Anosy (Scac), rafitra iray eo anivon'ny polisy. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
didina (nitranga in-1) : sahiran-tsaina ireo mpivarotra etsy amin'ny Petite vitesse sy ny mano- didina, omaly maraina ka nanatanteraka fivoriana. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
vanana (nitranga in-1) : ity krizin'ny taona 2009 mihalava hatraty amin'ny taona 2013 ity ve izany no nandripaka tanteraka ny fisainan'ny fiha- vanana malagasy. (Fifandrahonana)
NARODAN' (nitranga in-1) : VAO TSY ELA AKORY IZAY NO NARODAN'NY OLONA IHANY KOA NY TRANON'IZY IREO NO SADY NAIDITRA AM-PONJA TENY ANTANIMORA IZY NOHO NY ADY TANY. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
mpandalo (nitranga in-2) : Tetsy Anosibe tsena, omaly, no nanohizana izany fanaraha-maso izany ka nakana ireo satroka sy fitafiana teny an-tsena sy tamin'ny mpandalo. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
Carlton (nitranga in-1) : Nivoitra izany nandritra ny kaongresy faharoa natao tetsy amin'ny Carlton Anosy omaly. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
iraky (nitranga in-1) : Tsy kisendrasendra rahateo ny nanomezan'ny iraky ny Vondrona Sadc, ny Dr Léonardo Siamao fahalalahana tanteraka ny Cenit handray fanapahan-kevitra mahakasika ny raharaham-pifidianana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Tsirahonana (nitranga in-1) : Nanafana izany lanonana izany ny tarika Majeur 7 sy ny Tsirahonana Kidodo ary ireo mpilalaon'ny Meva production. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
hôpitaly (nitranga in-1) : Charlys efa-mianaka
Hangar (nitranga in-1) : Kliobana mpilalao rugby, zandriny indrindra vao herintaona, zanaky ny Rosa Club de L'Emyrne, ny XV Roses d'Antohomadinika III G Hangar. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
United (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
nihaonan' (nitranga in-1) : Efa nitranga izany tamin'ny taon-dasa, izay nihaonan' izy ireo tamin'ny Gabon, mpampiantrano. (Anjoron- »CAN »)
aleoko (nitranga in-1) : MALI # NIZERIA
dRakotovao (nitranga in-1) : Sady maka vola amin'ireo mpivarotra ireo ihany koa ireo olona ireo”, araka ny fitarainan- dRakotovao Joseph, filohan' ny delegen'ny tsena, etsy amin'ny Petite vitesse. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
Léonardo (nitranga in-1) : Tsy kisendrasendra rahateo ny nanomezan'ny iraky ny Vondrona Sadc, ny Dr Léonardo Siamao fahalalahana tanteraka ny Cenit handray fanapahan-kevitra mahakasika ny raharaham-pifidianana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Filankevitry (nitranga in-2) : Omaly no nodinihina tao anatin' ny Filankevitry ny gover-nemanta io soson-kevitra io saingy mbola miandry fankatoavana amin'ny Filankevitry ny minisitra. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
Andriamanarivo (nitranga in-2) : Voatery miakatra eto an-drenivohitra avokoa ireo ankizy mila izany”, araka ny nambaran'ny Pr Andriamanarivo Lalatiana, mpitsabo etsy amin'ny Hjra Ampefiloha. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
mafisy (nitranga in-1) : Noha- mafisin'ireo tompon' andraikitra nohadihadiana teny an-toerana mantsy fa maherin'ny 10 isan'andro eo izy ireo no manatona io sampan-draharaha io. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
nampahafantatra (nitranga in-1) : omaly no nampahafantatra ny vokatra vaovao ireo mpikambana eo anivon'ny tarika Ambondrona
Toamasina (nitranga in-1) : « Hatao amina distrika roa, dia i Soavinandriana sy i Toamasina I ny andrana momba ity vaksiny ity ho an'i Madagasikara », hoy ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon'ny minisiteran'ny Fahasalamam- bahoaka. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
hifanahantsahana (nitranga in-1) : Ny fampitahana ny isan'ireo mponina isaky ny distrika izay tokony hifanahantsahana amin'ny isan'ny solombavambahoaka handray toerana eny Tsimbazaza no nampiakatra io isa io, araka ny fanazavana avy amin'ireo mpanao politika nanasonia ny sori-dalana. (Antenimiera – Mety ho tafakatra 160 ny isan’ ireo depiote)
hahafahana (nitranga in-1) : Hampiasaina mandritra ny herintaona io lelavola io ary entina hijerena ny fomba hahafahana mitrandraka na ny rano na ny masoandro na ny rivotra hamatsiana herinaratra any Nosy-Be. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
vokary (nitranga in-1) : tamin'ny sabotsy teo no nohamasinina ny fanambadian'i Emilie sy Dafara, tany Fianarantsoa
azonay (nitranga in-1) : «Mbola ho ela io fe-potoana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana io ka azonay hatao tsara ny manohy ny fitakiana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
aretina (nitranga in-4) : ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon' ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka
Fisorohana ny aretina homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Anosibe (nitranga in-1) : Tetsy Anosibe tsena, omaly, no nanohizana izany fanaraha-maso izany ka nakana ireo satroka sy fitafiana teny an-tsena sy tamin'ny mpandalo. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
natao (nitranga in-3) : Nivoitra izany nandritra ny kaongresy faharoa natao tetsy amin'ny Carlton Anosy omaly. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
nandresen' (nitranga in-1) : « Ny teknika no somary voafetra ho an'ny mpilalao afrikanina fa raha ny taktika kosa dia nahitana betsaka tamin'ity Can ity, raha tsy hilaza afa-tsy ny fomba nandresen'i Nizeria an'i Côte d'Ivoire », hoy ihany i Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Hitondra (nitranga in-1) : Hitondra an-tsehatra io vokatra vaovao mitondra ny lohateny hoe «Havaoziko» io ry Beranto sy ny tariny io alahady io, etsy amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
aoriandriana (nitranga in-1) : Ny lohany hiray loha ihany ao aoriandriana ao. (Fifandrahonana)
mpatsaka (nitranga in-2) : Tokony ho tamin'ny iray volana lasa izay no nanaikitra ny tompony sy mpatsaka rano iray ary olona telo hafa monina eo amin'ny manodidina ny alika iray. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
Emilie (nitranga in-4) : tamin'ny sabotsy teo no nohamasinina ny fanambadian'i Emilie sy Dafara, tany Fianarantsoa
67ha (nitranga in-1) : 11h Real 07 67ha (4) # Tsiresy Ankazomanga (1). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
fahazoana (nitranga in-1) : Anisan'ireo firenena an-dalam-pandrosoana miisa valo, nahazo fankatoavana fahazoana famatsiam-bola avy amin'ny Gavi, ho afaka mampihatra ny andrana momba ny fampidirana ny vaksiny
ANTANIMORA (nitranga in-1) : VAO TSY ELA AKORY IZAY NO NARODAN'NY OLONA IHANY KOA NY TRANON'IZY IREO NO SADY NAIDITRA AM-PONJA TENY ANTANIMORA IZY NOHO NY ADY TANY. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nisolo (nitranga in-2) : nisolo tena an'Atsimondrano ny ekipan'ny XV Roses amin'ny “Intersection”
Mitady hanao sakelimihoajoro. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Marc (nitranga in-2) : araka ny vaovao navoa-kan'ny Agence France Presse, nivoaka omaly, dia «nolavin' ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana ao Afrika Atsimo ny fangatahan'ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, amin'ny hamerenana eo am-pelatanany ny pasipaorony». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Rakotomanga (nitranga in-2) : ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon' ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka
nanatanteraka (nitranga in-1) : sahiran-tsaina ireo mpivarotra etsy amin'ny Petite vitesse sy ny mano- didina, omaly maraina ka nanatanteraka fivoriana. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
Conservation (nitranga in-1) : Santionany amin'ireo voka-tsoa azo avy amin'ny fisian' ny Faritra Mando ireo, no notanisain'Andriamaro Luciano, tompon'andraikitry ny Faritra Mando avy ao amin'ny Conservation International, omaly teny Tsarasaotra, nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an' ny Faritra Mando, ankalazaina isaky ny 02 febroary. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
Rasoavahiny (nitranga in-1) : Ny fiarovana azy ireny ara-dalàna no tena tanjona», hoy Rasoavahiny Laurette, tompon' andraikitry ny zahavoary sy ny faritra arovana eo anivon'ny minisiteran' ny Tontolo iainana. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
lalàna (nitranga in-1) : Hisy ihany koa filankevitra mikasika ny lalàna sy ny ara-bola hametrahana ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina ao anatin'io tetikasa io », hoy ny vaovao avy amin'ny Banky Afrikanina ho amin'ny Fampandrosoana (Bad), izay handray anjara betsaka amin'ny fanatsarana ny fampidirana ireo mpampiasa vola tsy miankina ao anatin'io tetikasa io. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
International (nitranga in-1) : Santionany amin'ireo voka-tsoa azo avy amin'ny fisian' ny Faritra Mando ireo, no notanisain'Andriamaro Luciano, tompon'andraikitry ny Faritra Mando avy ao amin'ny Conservation International, omaly teny Tsarasaotra, nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an' ny Faritra Mando, ankalazaina isaky ny 02 febroary. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
Mando (nitranga in-7) : nisy ihany koa omaly ny fifaninanan'ny mpianatra avy amina sekoly efatra eto an-drenivohitra momba ny Faritra Mando
Harena voajanahary. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
Actuel' (nitranga in-1) : Notapahin'ny rehetra, tamin'ity taona ity, fa hajanona 10 ihany ireo ekipa mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga eo amin'ny diviziona voalohany taorian'ny tsy naharesenam-peo intsony ny Japan Actuel's. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
anatina (nitranga in-1) : Ao anatin' ny fitondrana ireo hetsika ho amin'ny fampandrosoana mandra-pahatapitry ny tetezamita dia havondrona ao anatina tahirin-kevitra iray ary hodinihina ny soson-kevitra omen'ireo Primatiora lefitra roa sy ireo mpandray anjara amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ireo mpamatsy vola mialohan'ny handaniana izany ny faran'ny volana febroary 2013. (Tapatapany)
nomarihy (nitranga in-2) : Raha ny fahafantarako azy dia mitovitovy amin'izay ihany ny isa natolotr'ireo antoko politika sasany», araka ny nomarihin'ny mpikambana eo anivon' ny vondrona politika Hpm, Ralison Roger, omaly. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
hanatontosana (nitranga in-1) : Ny alarobia faha-25 septambra 2013 indray kosa no hanatontosana ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka ary ny alarobia 23 oktobra 2013 no daty raikitra fa hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Ranomasimbe (nitranga in-1) : hANARA-MASO AKAIKY > Amin'ny volana marsa izao no hanokatra ny biraom-pifandraisany amin'i Mada- gasikara eto Antanana-rivo ny Vaomieran'ny Ranomasimbe Indianina (Coi). (Sombiny)
natokana (nitranga in-1) : Ny efitra iray dia natokana ho fandraisana olona. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Rakotondramboa (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
Keita (nitranga in-1) : Saika miantehitra amin'i Seydou Keita sy ny mpiandry tsatokazo kosa i Mali amin'io lalao io. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
handresen' (nitranga in-1) : Saika mpilalao mpila ravi -nahitra kosa anefa ny an' i Burkina Faso, ka mety ho lesoka kely no handresen' i Ghana azy ireo. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
hanaovana (nitranga in-3) : NATOKY TENA
Vao teo amin'ny fotoana hanaovana «tirs au but» nandritra ny fihaonana tamin'i Afrika Atsimo, mpampiantrano, dia efa natoky tena be ireo mpanao gazety maliana fa hibata fandresena ny Voro- mahery. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
hangatahana (nitranga in-1) : Ny hangatahana fotsiny dia ny mba hametrahana ireo fepetra fampitoniana rehetra mialoha ny fifidianana. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
mpilalao (nitranga in-10) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Rakotoarimanana (nitranga in-1) : “Mialoha ny fihaonan'ny ekipa tsirairay dia ireo ekipa sokajy latsaky ny 13 taona aloha no mihaona”, hoy i Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta, filohan'ny ligin'Analamanga ho an'ny baolina kitra. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
minisiteran' (nitranga in-6) : Ny fiarovana azy ireny ara-dalàna no tena tanjona», hoy Rasoavahiny Laurette, tompon' andraikitry ny zahavoary sy ny faritra arovana eo anivon'ny minisiteran' ny Tontolo iainana. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
dRamanantsoa (nitranga in-1) : Manana anjara paompin-drano 15 sy fanasan-damba amin'izany ny Cua”, araka ny nambaran- dRamanantsoa Sylvia, avy amin'ny Wisup. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
halaly (nitranga in-1) : Anisan'izany ny fanitarana ny fambolena ho eny amin'ny sisim-parihy, izay mampihena ny halalin'ny rano, ny fanariana maloton'ny orinasa amin'izy ireny, ny fitrandrahana ny ala diso tafahoatra, ny afo. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
Notapahy (nitranga in-1) : Notapahin'ny rehetra, tamin'ity taona ity, fa hajanona 10 ihany ireo ekipa mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga eo amin'ny diviziona voalohany taorian'ny tsy naharesenam-peo intsony ny Japan Actuel's. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
fonjaben' (nitranga in-1) : roa lahy tamin'ireo telo voasambotry ny polisy, tetsy Manarintsoa ny 4 febroary teo, izay voarohirohy tamina fifohana rongony, no notanana vonjimaika eny amin' ny fonjaben'Antanimora rehefa avy natolotra ny Fampanoavana, omaly. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
hahatonga (nitranga in-1) : Vao mainka hahatonga ireo olom-boatendry ( tamin'ny fomba mora ) hipi-kelika izany rehetra izany. (Fanalavam-potoana)
Fanahisoa (nitranga in-1) : Hatramin'izao, miandry mpanohana izahay », hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon' andraikitra teknika amin'ity fihaonana mety hahazoana omby sy ondry matavy ity. (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
namatsy (nitranga in-1) : Ny Fondation Coca-cola Afrique no namatsy vola ny tetikasa, izay mitentina 1 400 000 dolara. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
tiako (nitranga in-1) : Nampian' ny filalaovan'ny Sadc ny asa fanelanelanana ka vao mainka nampitombo ny halako bika tsy tiako tarehy teo amin'ny mpomba ny an-daniny sy ny an-kilany. (Fifandrahonana)
Promotion (nitranga in-1) : 13h Promotion Tsaramasay (1) # CEA Tambohobe (2). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
nandà (nitranga in-1) : JR
Liban (nitranga in-1) : Mbola tsy voarara toy ny any Liban rahateo mantsy ny fandefasana mpiasa any an-toerana. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
hotaizany (nitranga in-1) : Nigadra teny Antanimora
delegen' (nitranga in-2) : Sady maka vola amin'ireo mpivarotra ireo ihany koa ireo olona ireo”, araka ny fitarainan- dRakotovao Joseph, filohan' ny delegen'ny tsena, etsy amin'ny Petite vitesse. (Petite vitesse – Misy olona mitarika hivoaka ny tsenany ireo mpivarotra)
nilaza (nitranga in-4) : Ny 30 jolay 2010 no tonga tao amiko ny renim-pianakaviana iray bevohoka ary nilaza fa mihetsiketsika. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
Japan (nitranga in-1) : Notapahin'ny rehetra, tamin'ity taona ity, fa hajanona 10 ihany ireo ekipa mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga eo amin'ny diviziona voalohany taorian'ny tsy naharesenam-peo intsony ny Japan Actuel's. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Behoririka (nitranga in-1) : Ireo tompomenakely hifandom-bera sy hifaly havanja rehefa ho tonga ny fotoana hampiray ny tombontsoa… Fa ianareo nitorevaka tetsy amin'ny kianjan'ny 13 mey na nidanik'andro tetsy amin'ny Magro Behoririka, moa misy fantatrareo ny zava-miafin'ny adiady politikan-dry zareo ireo. (Fifandrahonana)
filami­nana (nitranga in-1) : Betsaka ireo mponina no mba niaro ahy, nalahelo ny zava-nitranga saingy mpitandro ny filami­nana amin'ny kamiao no nifandona tamin'izy ireo tamin'izany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Marius (nitranga in-2) : ny Dr Rakotomanga Marius, lehiben'ny sampan-draharaha momba ny vaksiny eo anivon' ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka
Wisup (nitranga in-2) : Fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina avy amin'ny tetikasa Wisup no nahazoana fanampiana. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
nizeriana (nitranga in-1) : mPIVAROTENA
baràna (nitranga in-1) : Mahakasika ireo fanam- baràna fa mijaly ireo mpiasa any dia nilaza ny teo anivon' ny minisiteran'ny Asam-panjakana sy ny Lalàna sosialy (Mfoptls) fa mbola vitsy ny fitarainana voaray hatreto. (Dia any Ivelany – Mampidi-bola ho an’ny pasipaoro ireo mpiasa ho any Koweit)
Nizeria (nitranga in-3) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Radimiarison (nitranga in-1) : Tanjona ny ho tafakatra ao amin'ny Elite 1 mihitsy», hoy Radimiarison Heriniaina, mpitantana sady mpilalao rahateo. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
nifohan' (nitranga in-1) : Raha ny voalazan'ilay tatitra hatrany dia efa nahatratra herintaona mahery efa-bolana ny faharetan'ny nifohan'ny iray tamin'ireto mpianatra ireto ity zava-maha- domelina ity. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
nosokajiany (nitranga in-1) : Naato anefa izany asa izany tamin'ity taona ity noho ny olana ara-toekarena iraisam-pirenena niteraka fatiantoka ka tsy maintsy nampiatoana ireo tetikasa izay nosokajiany ho mbola tsy laharam-pahamehana. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
Imery (nitranga in-1) : Voasambotra > Lehilahy iray no voasambotra tamin'ilay resaka halatra fitaovana fakana herinaratra amin'ny herin' ny masoandro fananan' ny orinasa iray tany Imerin'imady Ambositra ny 4 febroary lasa teo. (Tapatapany)
nofaritana (nitranga in-1) : izy tsy nihemotra no mety ho nahagaga fa efa nampoizin' ny maro ihany fa tsy ho voatazona ireo tetiandrom-pifidianana nofaritana tamin'ny volana aogositra 2012. (Fanalavam-potoana)
hijerena (nitranga in-1) : Hampiasaina mandritra ny herintaona io lelavola io ary entina hijerena ny fomba hahafahana mitrandraka na ny rano na ny masoandro na ny rivotra hamatsiana herinaratra any Nosy-Be. (Fotodrafitrasa – Iray tapitrisa dôlara hanohanana ny famokarana angovo ao Nosy-Be)
Nampian' (nitranga in-1) : Nampian' ny filalaovan'ny Sadc ny asa fanelanelanana ka vao mainka nampitombo ny halako bika tsy tiako tarehy teo amin'ny mpomba ny an-daniny sy ny an-kilany. (Fifandrahonana)
FASO (nitranga in-1) : GHANA # BURKINA FASO
Kliobana (nitranga in-1) : Kliobana mpilalao rugby, zandriny indrindra vao herintaona, zanaky ny Rosa Club de L'Emyrne, ny XV Roses d'Antohomadinika III G Hangar. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
nahemotra (nitranga in-1) : Araka ny fanovana noentin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit) sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana dia nahemotra ny alarobia 24 jolay 2013 ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nanamontsanan' (nitranga in-1) : taorian'ny “Grand Tournoi de la ville de Tana”, izay nanamontsanan'ny AS Adema ny Tana Formation, dia hifamerina eo amin'ny fanombohan'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Edgard (nitranga in-1) : Zava-dehibe ny famatsiana rano ho an'ny mponina ary efa nanomboka tamin'ny volana oktobra ny fanamboarana ny fotodrafitrasa eto an-drenivohitra”, hoy ny kabarin-dRazafindravahy Edgard, Pds-n'Antananarivo omaly, nisolo tena ireo kaominina rehetra, tetsy Antanimena sady nisaotra ny mpamatsy vola. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Rakotondrabe (nitranga in-1) : mirona kokoa any amin'ny mety ho fihaonan' i Ghana sy Nizeria ny lalao famaranana, raha ny hevitr'i Romuald Rakotondrabe na i Rôrô, mpilalao iraisam-pirenena fahiny lasa teknisiana mpampianatra baolina kitra ao amin'ny AS Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
hifarana (nitranga in-1) : roa herinandro eo sisa dia hifarana ny fifanintsanana kitra lalaovin'olona fito kara- karain'ny Fikambanana mitaiza tanora (Fimita) eny Ankazomanga-Andraharo. (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
misolo (nitranga in-1) : Efa tafakatra Diviziona faharoa izy ka misolo tena an'Atsimondrano ao amin'ny «Intersection». (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
tezay (nitranga in-1) : ireo zaza roa narian-dreniny ka tezain'i Charlys
Namibia (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny 13 hatramin'ny 23 marsa ho avy izao io fifaninanana io, ka ny lalana nodiavin'Andriatokiana nandritra ny fifaninanam-paritra, tany Namibia, tamin'ny volana janoary, no nahatonga azy hahazo ity fanasana manokana ity. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
NIZERIA (nitranga in-2) : MALI # NIZERIA
Luciano (nitranga in-1) : Santionany amin'ireo voka-tsoa azo avy amin'ny fisian' ny Faritra Mando ireo, no notanisain'Andriamaro Luciano, tompon'andraikitry ny Faritra Mando avy ao amin'ny Conservation International, omaly teny Tsarasaotra, nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an' ny Faritra Mando, ankalazaina isaky ny 02 febroary. (Tontolo iainana – Iharan’ny tsindry nefa mitera-boka-tsoa ny Faritra Mando)
Jean (nitranga in-3) : Ny Sekretera jeneralin'ny Vaomieran'ny ranomasimbe Indianina, Jean Claude de l'Estrac, dia nanamarika fa «ny tsy fankasitrahan'ny ankamaroan'ireo mpanao politika io soson-kevitra io no antony nandraisan'ny Cenit sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana io fanapaha-kevitra io. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
junior (nitranga in-1) : na dia tsy isan'ireo tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny sokajy junior aza Andriatokiana Ratsimandresy dia isan'ireo mpilalao tenisy nahazo ny fanasana manokana hiatrika izany any Kenya. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
hody (nitranga in-1) : Hanantena fitoniana tahaka ny inona ihany koa moa isika raha toa ka ny an-daniny mandrahona an-dranona mikasa hanao amboletra hody hiverina an-tanindrazana, moa ny an-kilany mandrahona tsy fahatanterahan'ny fifidianana raha tsy misy ny vatan-tenany mijoro eto an-tanàna. (Fifandrahonana)
AMBATOMARO (nitranga in-1) : ireo zaza roa narian-dreniny ka tezain'i Charlys
Andriatoavina (nitranga in-1) : Ankoatra azy dia handrafitra ny delegasiona malagasy ry Andriatoavina Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Randy Randrianasoloson, Océane Razakaboana, Sariaka Radilofe ary Jackinah Razafimahatratra. (Tenisy Afrika – Voaasa manokana any Kenya Andriatokiana)
Ampefiloha (nitranga in-1) : Voatery miakatra eto an-drenivohitra avokoa ireo ankizy mila izany”, araka ny nambaran'ny Pr Andriamanarivo Lalatiana, mpitsabo etsy amin'ny Hjra Ampefiloha. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
Ramanandraibe (nitranga in-1) : Rafanjanirina Louise Ernestine no tena anarana fa efa very anarana amin'ny Emilie izy ary Ramanandraibe Jean François na i Dafara kosa no nampiakatra azy ho vadiny. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Hanantena (nitranga in-1) : Hanantena fitoniana tahaka ny inona ihany koa moa isika raha toa ka ny an-daniny mandrahona an-dranona mikasa hanao amboletra hody hiverina an-tanindrazana, moa ny an-kilany mandrahona tsy fahatanterahan'ny fifidianana raha tsy misy ny vatan-tenany mijoro eto an-tanàna. (Fifandrahonana)
taktika (nitranga in-1) : « Ny teknika no somary voafetra ho an'ny mpilalao afrikanina fa raha ny taktika kosa dia nahitana betsaka tamin'ity Can ity, raha tsy hilaza afa-tsy ny fomba nandresen'i Nizeria an'i Côte d'Ivoire », hoy ihany i Rôrô. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
fahateren' (nitranga in-1) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
nihetsiketsika (nitranga in-1) : Bevohoka ny nenifarako tamin'izay ary nihetsiketsika. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Andrinirina (nitranga in-1) : Taorian'ny vodiondry izay notanterahina ny marainan' ny sabotsy sy ny fisoratana tany amin'ny firaisana, dia teny amin'ny fiangonana katolika Sahalava ao Fianarantsoa no nitsofan-drano ny fanambadian'izy roa ary taorian'izay ny fiarahana nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny namana, teny amin'ny Espace Andrinirina, teny Tsianolondroa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
naharay (nitranga in-1) : Ny 25 janoary ihany ny polisim-pirenena dia efa nanomboka naharay fitara-inana mahakasika vaky trano tao Betafo. (Vaky trano any Betafo – Vao nivoaka ny fonja dia tratra indray ilay mpandray halatra)
Keshy (nitranga in-1) : MALI # NIZERIA
Louise (nitranga in-1) : Rafanjanirina Louise Ernestine no tena anarana fa efa very anarana amin'ny Emilie izy ary Ramanandraibe Jean François na i Dafara kosa no nampiakatra azy ho vadiny. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
noraisy (nitranga in-1) : «Ny alatsinainy 4 febroary teo no nivoahan'ity fanapahan-kevitry noraisin' ny Fitsarana tao Afrika Atsimo ity», araka ny voalazan'ny Afp ihany. (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
nantsakaina (nitranga in-1) : Nody ventiny ny rano nantsakaina, omaly satria nahazo famatsiam-bola hananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany ny Cua. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Antohomadinika (nitranga in-1) : 9h Fanatic Ankorondrano atsinanana (2) # Fc JAH Antohomadinika (2). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
Production (nitranga in-1) : Ity farany izay mpaka sary sady teknisiana ao anatin'ny Meva Production ary efa nandray anjara tamin'ilay horonantsary «Taniah» ihany koa. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
nihemotra (nitranga in-2) : izy tsy nihemotra no mety ho nahagaga fa efa nampoizin' ny maro ihany fa tsy ho voatazona ireo tetiandrom-pifidianana nofaritana tamin'ny volana aogositra 2012. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
Darline (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
Diviziona (nitranga in-2) : Efa tafakatra Diviziona faharoa izy ka misolo tena an'Atsimondrano ao amin'ny «Intersection». (Baolina lavalava – Miomana fatratra amin’ ny «Intersection» ny XV Roses)
Taolagnaro (nitranga in-1) : nampitsahatra ny asa nataony, tao amin'ny toerana kasainy mbola hitrandrahana fasimainty, ao Sainte-Luce sy akaikin' i Manantenina ao Taolagnaro ny kaompania Qmm. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
nalahelo (nitranga in-2) : Betsaka ireo mponina no mba niaro ahy, nalahelo ny zava-nitranga saingy mpitandro ny filami­nana amin'ny kamiao no nifandona tamin'izy ireo tamin'izany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Monica (nitranga in-1) : Monica Rasoloarison. (Fahasalamana – Ankizivavy 15 000 hanaovana andrana vaksiny fanefitry ny homamiadana)
nampiteraka (nitranga in-4) : Teo amin'ny faha-16 taonany ity renim-pianakaviana ity dia efa nanomboka nampiteraka olona. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Fondation (nitranga in-2) : Ny Fondation Coca-cola Afrique no namatsy vola ny tetikasa, izay mitentina 1 400 000 dolara. (Fahadiovana sy fidiovana – Kaominina fito nahazo famatsiam-bola momba ny rano)
Magro (nitranga in-1) : Ireo tompomenakely hifandom-bera sy hifaly havanja rehefa ho tonga ny fotoana hampiray ny tombontsoa… Fa ianareo nitorevaka tetsy amin'ny kianjan'ny 13 mey na nidanik'andro tetsy amin'ny Magro Behoririka, moa misy fantatrareo ny zava-miafin'ny adiady politikan-dry zareo ireo. (Fifandrahonana)
nojerena (nitranga in-1) : Rehefa nojerena dia mbola miandry ora vitsivitsy izany hoe ny hariva mihitsy izy vao ho teraka. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
nahatratra (nitranga in-1) : Raha ny voalazan'ilay tatitra hatrany dia efa nahatratra herintaona mahery efa-bolana ny faharetan'ny nifohan'ny iray tamin'ireto mpianatra ireto ity zava-maha- domelina ity. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
Naato (nitranga in-1) : Naato anefa izany asa izany tamin'ity taona ity noho ny olana ara-toekarena iraisam-pirenena niteraka fatiantoka ka tsy maintsy nampiatoana ireo tetikasa izay nosokajiany ho mbola tsy laharam-pahamehana. (Fitrandrahana – Nitsahatra amin’ ny ampahany ny asan’ny Qmm)
nohamasinina (nitranga in-1) : tamin'ny sabotsy teo no nohamasinina ny fanambadian'i Emilie sy Dafara, tany Fianarantsoa
diviziona (nitranga in-2) : Hiavaka ny fisian'ny lalao andraisan'ireo ekipa latsaky ny 13 taona anjara, araka ny fitakiana nataon'ny ligy tamin'ireo ekipa rehetra mpandray anjara ao amin'ny diviziona voalohany. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
Marie (nitranga in-1) : 14h Ex RCA Ankazomanga (0) # Sainte Marie Ankazomanga (0). (Kitra Fimita – Ho tapitra afaka roa herinandro ny fifanintsanana)
Carion (nitranga in-1) : Hanomboka ny sabotsy eny amin'ny kianja tsy voajanaharin'i Carion kosa ireo lalao mandroso hafa ho an'ity fifaninanam-paritra ity. (Kitra Ligue 1 Analamanga – Hifamerina sahady ny AS Adema sy Tana Formation)
nampigadra (nitranga in-1) : Koa satria niezaka nijoro hatrany aho tamin'ny tsy rariny, fibodoana ny taninay dia izay no nampigadra ahy», hoy ny fitantarany. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Béatrice (nitranga in-2) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
mpilalaon' (nitranga in-2) : Raha isan' ireo mifantina ny mpilalao mendrika ho an'ity Can ity aho dia i Jonnathan Pitroipa, mpilalaon'i Burkina Faso no hahazo izany. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
Hjra (nitranga in-3) : “Eto amin'ny Hjra irery ihany koa no ahitana toeram- pitsaboana harifomba eto amintsika. (Fitsaboana – Profesora roa ihany no mandidy zaza eto Madagasikara)
François (nitranga in-1) : Rafanjanirina Louise Ernestine no tena anarana fa efa very anarana amin'ny Emilie izy ary Ramanandraibe Jean François na i Dafara kosa no nampiakatra azy ho vadiny. (« Rafozan-tsarotiny » – Niditra lalina amin’ny sehatry ny fanambadiana i Emilie)
fanagiazana (nitranga in-1) : Ny fitoriana napetraky ny fikambanan'ireo niha-ram-boina tamin'ny raharaha 7 febroary (Av7) no fantatra fa mbola nahatonga ny fanagiazana ny pasipaoron' ny Filoha teo aloha. (Afrika Atsimo – Mbola nogiazan’ny Fitsarana ny pasipaoron-dRavalomanana)
Nofaritan' (nitranga in-1) : Nofaritan'ny olona teo akaikinay ary nolazainy fa azy mantsy ny tany nisy ilay trano. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Michou (nitranga in-2) : olona telo no efa naiditra am-ponja vonjimaika afak'omaly maha-kasika ny famonoana an'i Michou, ilay tovovavy 16 taona mpianatra teny amin' ny oniversiten'Antanana-rivo ary hita faty teny an-toerana ny 15 janoary teo. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
hanontana (nitranga in-1) : Araka ny fanazavan'ny Filohan'ny Cenit, Béatrice Atallah dia «ny tsy fahatrarana ny fe-potoana izay tokony hanontana ny lisi-pifidianana vonjimaika sy ny fahateren'ny fotoana izay tokony hampidirana ny anaran'ireo mpifidy tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana nasiam-panavaozana no anton'io fihemoran'ny fifidianana io». (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
STARS (nitranga in-1) : TOMBONY HO AN'NY BLACK STARS GANEANA. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
notanterahana (nitranga in-1) : «Tratry ny fepetra tsy azo anoharana isika ka tsy maintsy nandray izao fanapahan-kevitra izao», araka ny nohamafisiny taorian'ny fivoriana notanterahana teny amin'ny ivontoeram-pivoriana iraisam-pirenena teny Ivato, omaly. (Fanapahan-kevitra teny Ivato – Nihemotra ny datim-pifidianana fa tsy nisy niova ny filaharany)
mpipaika (nitranga in-1) : Ireo vehivavy mpipaika vato ety aminay izao dia izaho daholo no nampiteraka azy ireo», hoy ihany maman'i Tojo. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Anosy (nitranga in-5) : Nivoitra izany nandritra ny kaongresy faharoa natao tetsy amin'ny Carlton Anosy omaly. (Famonoana an’i Michou – Nahazo baiko hanohy ny famotorana ny polisy)
Seydou (nitranga in-1) : Saika miantehitra amin'i Seydou Keita sy ny mpiandry tsatokazo kosa i Mali amin'io lalao io. (Tombatombana CAN 2013 – Manatombo amin’ireo lalao manasa-dalana i Ghana sy Nizeria)
Razandrininjokiny (nitranga in-1) : Tsy maintsy nalaina ny satroka kasikety na eny amin'ny ankizy aza satria mety antonona olon-dehibe ireny hoentina mandroba”, araka ny fanazavana avy amin'ny lietna Razandrininjokiny Honoré, eo anivon'ny seraseran'ny zandarmaria. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
lietna (nitranga in-1) : Tsy maintsy nalaina ny satroka kasikety na eny amin'ny ankizy aza satria mety antonona olon-dehibe ireny hoentina mandroba”, araka ny fanazavana avy amin'ny lietna Razandrininjokiny Honoré, eo anivon'ny seraseran'ny zandarmaria. (Fanamiana tsy ara-dalana – Olona 50 mahery noraofina teny an-dalana)
Anisan' (nitranga in-3) : Anisan'izany ny fanitarana ny fambolena ho eny amin'ny sisim-parihy, izay mampihena ny halalin'ny rano, ny fanariana maloton'ny orinasa amin'izy ireny, ny fitrandrahana ny ala diso tafahoatra, ny afo. (Rakikira fahenina – Hitondra an-tsehatra ny «Havaoziko» ny tarika Ambondrona)
teto (nitranga in-5) : «Niseho ho mahalala ahy indray io ramatoa io vao tonga teto amiko ary nilaza fa mihetsiketsika ho teraka. (Ivandry – Raim-pianakaviana ahiana ho matin’ny haromotana)
2005 (nitranga in-1) : Ny taona 2005 no maty ny vadiny izay mpanao trano. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
2009 (nitranga in-2) : ity krizin'ny taona 2009 mihalava hatraty amin'ny taona 2013 ity ve izany no nandripaka tanteraka ny fisainan'ny fiha- vanana malagasy. (Fifohana zava-mahadomelina – Mpianatry ny lisea roa lahy naiditra am-ponja vonjimaika)
Analamahitsy (nitranga in-1) : «Tsy vitsy ireo mahalala ahy tany amin'izay toerana rehetra nalehako hatreny Andraisoro, Analamahitsy ary Mahajanga. (Renin-jaza sady mpanotra – Vehivavy tokan-tena nanarian’ny olona zaza roa)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/6_Febroary_2013&oldid=9650149"
Voaova farany tamin'ny 6 Febroary 2013 amin'ny 22:02 ity pejy ity.